မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ်ကိုယ်စားပြု လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုများ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > ကြော်ငြာချက်များ > MEF အမှတ်တရ လှုပ်ရှားမှုများ > မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ်ကိုယ်စားပြု လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုများ
View Full Version : မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ်ကိုယ်စားပြု လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုများ
စင်္ကာပူ မှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ....
CIVIL ENGINEERING SEMINAR SINGAPORE (2010)လေးကို .....
12 Dec နေ့မှာ Dover က Poly ကျောင်းမှာ ... ဒီအစဉ်လေးကို တနေ့လုံး ကျင်းပဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
နေ့လည်စာ ဘူဖေး ၊ Break Time ကော်ဖီ မုန့် ကအစ free ကျွေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆရာကြီးဦးညီလှငယ် က ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ ...... ကိုယ့်အိတ် ကိုယ်စိုက်ပြီး ကိုကျော်သက်ဦးတို့စီနီယာအင်ဂျင်နီယာတွေစလုပ်နေတာတော့ ကြာပါပြီ။ ထပ်မံပြီးတော့လဲ ဒီလို အထူးသဖြင့် အင်ဂျင်နီယာငယ်တွေအတွက် ပိုအကျိုးရှိမယ့် Seminar တွေ ဆက်လက်လုပ်သွားဖို့လဲ ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဆရာကြီးက အာစရိယပူဇော်ပွဲ Singapore 2010 (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,9694.0.html) ကိုလာရင်းနဲ့ ဒီ Seminar လေးကို ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်တက်ရောက်မယ်လို့သိရပါတယ်။
ဆရာကြီးက Civil Engineer တွေအချင်းချင်း စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ knowlwege sharing လုပ်စေချင်တာပါ ၊ ရှေ့ကသွားနေကြသူတွေကလက်တွဲခေါ်နိုင်ကြရင် နောက်လူတွေအတွက် အင်မတန်အကျိုးရှိကြမှာဧကန်ပါ။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ... ကျနော်တို့ MEF သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့လဲ တူညီပါတယ်။
ကျနော်လဲကိုယ်တိုင်ဟောပြောဝင်ရောက်ပါဝင်ချင်ပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မပါနိုင်ခဲ့ဘူး။ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင်တော့လို့ပါ။ လုပ်ချင်ပေမယ့် အချိန်မပေးနိုင်တာအဓိကပါ။
ဒီမနက်ကဘဲ ကိုထွန်းအောင်ကျော် register လုပ်ရမယ့်လင့်လေး ပို့လာလို့ ... ၀င်ကြည့်ရင်း အကြံ တခုရမိတယ် ....[/color]
ကျနော်တို့ MEF က Civil Engineer တွေ (သို့) တခြားစိတ်ဝင်စားသူတွေ စုပြီးသွားကြဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ် ...
စင်္ကာပူရောက် MEF_forumer / Civil Engineer တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတခုဆိုရင်လဲမမှားဘူးပေါ့ ...
ဖိုရမ်အထိန်းအမှတ် တခုခု (T-shirt မှာ MEF logo or web site တခုခုရိုက်ပြီး ၀တ်သွားတာမျိုးဖြစ်ဖြစ် ၊ MEF အကြောင်း Mini Journal quality ကောင်းကောင်းလေးတွေ မျှဝေတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်) သိသာစေမယ့်သဘောမျိုးလေးနဲ့ပေါ့ ...
ကြုံကြိုက်တုန်းလေး ... MEF ကိုလဲ တဘက်တလမ်းကနေ လူပိုသိလာအောင် လုပ်စေချင်တာပါ ....
လူပိုသိတော့ ကျနော်တို့ စုပေါင်းဆွေးနွေးမျှဝေတာလေးတွေ လိုအပ်မယ့်သူတွေဆီ အလွယ်တကူရောက်သွားနိုင်တာပေါ့ဗျာ ....
ပိုကောင်းမယ့် အကြံဥာဏ်လေးတွေကိုရောပေါ့ ...
အမှန်တော့ Civil Engineering နဲ့ဆက်စပ်ပေမယ့် တခြားသူတွေရဲ့ အကြံလေးတွေရှိရင်လဲ ၀င်ရောက်ပေးကြပါ ...
ပြောမယ်ဆိုရင် ဖိုရမ်တခုလုံးနဲ့လဲသက်ဆိုင်နေလို့ပါ ....
ရရှိတဲ့ အခွင့်အရေးလေးအပေါ် အခြေခံလို့ ဖိုရမ်ကိုကိုယ်စားပြုပြီး သမိုင်းဝင်မယ့် လှုပ်ရှားမှုတခု လုပ်ဆောင်ကြဖို့ပါ .....
ဖိုရမ်မန်ဘာတွေ တိုးပွားစေမယ့် ကိစ်စနဲ့လဲ တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေပါတယ် ....
Online Register Link ....
ဒါမှမဟုတ် Seminar ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ refreshments ဝေတဲ့အပိုင်းမှာ
refreshments လေးတွေနဲ့အတူ ကိုချစ်ပြောသလို လက်ကမ်းစာလေးတွေ အတူတူပေးလိုက်ရင်ကော
ခုတစ်လော ဖိုရမ်ထဲမှာ အထူးသဖြင့် အမြဲတမ်းတက်ကြွနေတတ်တဲ့ စလုံး မန်ဘာတွေ တော်တော်ကို သွေးအေးနေပါတယ်။ (ဦးရီးထွန်းက လွဲရင်ပေါ့)
သွေးအေးစေဖို့ အကြောင်းတရားတွေ အခြေအနေတွေကလည်း ဖန်တီးပေးနေတာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အရေးရယ် အကြောင်းရယ် ထူးထူးခြားခြား ပေါ်လာပီ ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုမှ ဘယ်သူမှ မနေနိုင်တာ MEF မန်ဘာတွေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စရိုက်လေးတစ်ခုပါပဲ။
ဒါဟာ ဘာကို ဖော်ပြနေလဲဆိုရင် ဖိုရမ် အပေါ်ထားတဲ့ သံယောဇဉ်စိတ်လေးပါ။
တစ်ခါတစ်ရံ မောင်နှမအချင်းချင်း၇န်ဖြစ်ကြတယ်.. မခေါ်မပြောပဲ စိတ်ကောက်နေပေမယ့် တစ်ခုခုများ ဖြစ်ပီဆိုရင် သွေးက အလိုလိုနီးတတ်သလိုပေါ့လေ။
ခုကိစ္စတစ်ခု ပေါ်လာလို့ ဖိုရမ်မောင်နှမတွေ အချင်းချင်း တိုင်ပင်မိကြပါတယ်။
ဘယ်သူမှ စမရေးကြလို့ ကျမပဲ ရေးလိုက်ပီနော်။
နောက်လထဲမှာ ကျမတို့ စလုံးမှာ Civil Engineer တွေရဲ့ Seminor တစ်ခုရှိပါတယ်။
သေသေချာချာ ခမ်းခမ်းနားနားလုပ်မယ့် အခန်းအနားကြီးတစ်ခုပါ။
ဒီလို မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေ တွေ့ကြ ဆုံကြ ဆွေးနွေးကြမယ့် အချိန်မှာ ကျမတို့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် အနေနဲ့လည်း Activity တစ်ခု လုပ်သင့်တယ်လို့ စလုံးက မောင်နှမတွေ ခံယူလိုက်မိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဖိုရမ်ထဲမှာ ပို့တွေအပြန်အလှန်ရေးမှာထက်စာရင် ခဏလောက်တွေ့ကြရအောင် ဆိုပီး နီးစပ်ရာလေး ဖုန်းဆက်လို့ အားလပ်ရက် သောကြာနေ့မှာ တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်ကယ်ကို တက်သုတ်ရိုက်လိုက်ရတာကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲ meeting တစ်ခုရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
မိသားစုတာဝန်တွေ အလုပ်တာဝန်တွေကြားက ဖိုရမ်အပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးတဲ့ ကိုချစ်သီးကိုတော့ မလေးစားပဲ မနေနိုင်ပါဘူး။
အဲနောက် လက်ဖက်ရည်စကားဝိုင်းလေးဆီ ကိုထွန်း၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုဖြိုး၊ ကိုလိပ်ကြီး၊ကိုပါကြီးတို့လည်း လာခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုဖြိုးမောင် ကိုဖိုးကိုတို့ဆီတော့ နောက်ကျမှ ဖုန်းဆက်ပြောမိခဲ့ပါတယ်၊ ဒါကတော့ ကေပီဇက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ပါ။ ကျန်သေးတဲ့ စလုံးမန်ဘာတွေကို ကေပီဇက်က တောင်းပန်ပါတယ်။
နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာ တစ်ရက်လောက် ထပ်တွေ့ပါဦးမယ်။ အိုကေ အစီအစဉ်လေးတွေ ဆက်ပြောမယ်နော်
Civil Engineer တွေရဲ့ ပွဲဆိုပေမယ့် အင်ဂျင်နီယာ အများစု လာကြမယ့်ပွဲဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျမတို့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖို၇မ်အနေနဲ့ ကျမတို့ဖိုရမ်တိုးတက်ရေးအတွက်၊ မြန်မာစာပေအွန်လိုင်းလောကမှာ ဒီလိုဖိုရမ်တစ်ခု ရပ်တည်နေပါလား ဆိုတာကို မသိသေးတဲ့ လူတွေ သတိထားမိစေဖို့အတွက်၊ နည်းပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်တွေ ကိုဖိတ်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်လို့ ကျမထင်မြင်မိပါတယ်။ ဒီအတွက် ကျမတို့ အကြမ်းဖျင်းစဉ်းစားထားတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။
၁ ) ကျမတို့ ထုတ်မယ်ထုတ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားခဲ့တဲ့ဖို၇မ်အထိမ်းအမှတ်ကီးချိန်းကို အချိန်မှီထုတ်ပါမယ်။ တက်ရောက်လာတဲ့ လူတွေအားလုံးကို ဝေပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်။ အမှန်တော့ ရောင်းချဖို့ စိတ်ကူးထားပေမယ့် ကျမတို့ဖိုရမ်သတင်း ပိုမိုပျံ့နှံစေရေးအတွက် ခုလို စီစဉ်မိတာပါ။
၂) လက်ကမ်းစာစောင် ဝေဖို့ စဉ်းစားပါသော်လည် ဖိုရမ်ဟာ ရောင်းကုန်ကြော်ငြာပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့ အတွက် ဘယ်လိုမှ အစဉ်မပြေပါဘူး။ ဒီနေ့ A5 Size ဖိုရမ်သမိုင်းကြောင့် အပါဝင် forum preview စာစောင်လေးတစ်ခု ထုတ်ပီဝေမျှပါမယ်။ မန္တလေး မန်ဘာတွေ တွေ့ဆုံပွဲတုန်းက လုပ်ထားတဲ့ Slide show ကို့ထပ်မံမွန်းမံမယ် စိတ်ကူးမိပါတယ်။
၃) ဖိုရမ်ကိုယ်စားပြု သွားကြမယ့် မန်ဘာတွေ အားလုံးအတွက် ဖို၇မ်အထိမ်းအမှတ် Tshirt များ ၀တ်ဆင်သွားပါမယ်။ ဒီတော့ ဖို၇မ်အထိမ်းအမှတ် Tshirt လည်း စတင်ထုတ်ပါမယ်။
ကီးချိန်းကို ထုတ်လုပ်ဖို့ ရန်ကုန်မှာပဲ စီစဉ်ပီးသား ဖြစ်နေလို့ ၇န်ကုန်မှာပဲ ထုတ်ပါမယ်။ ( ၇န်ကုန်မှ အသစ်စက်စက် မ၈င်္လာစုံတွဲကို သယ်ခိုင်း၇တော့မယ် :P)
လက်ကမ်းစာအုပ် ကိုတော့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲ စဉ်းစားမိလို့ စလုံးမှာပဲ ထုတ်ပါမယ်။
Tshirt ကိုလည်း ဒီဇိုင်းအတည်ပြုပီးတဲ့ အခါ စလုံးမှာ တစ်ဝက် ၇န်ကုန်မှာ တစ်ဝက် print လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်. (ဒီဇိုင်းက တစ်မျိုးတည်း တစ်ပုံစံတည်း ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် )
ဖိုရမ်က မောင်လေး သိုး၊ မောင်လေးလောက၊ စပိုင်ချစ်သူဝိုင်းဝန်းကူညီပေးပါဦးနော်။
အဲဒီ့ seminor ပွဲအတွက် စလုံးမန်ဘာတွေက အလှူငွေ မတည်ပေးထားပါတယ်။
- ကိုကြီးထွန်းက S$100
-ကိုဖြိုး -S$ 50
-ကိုလိပ်ကြီး - S$50
နောက်ထပ်မန်ဘာတွေကလည်း လှူမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ နောက်မှပဲ update ထပ်လုပ်တော့မယ်
(BTW... မတွေ့ရတာကြာပီ ဖြစ်သော စလုံးမန်ဘာများအားလုံး ... အားလပ်ရက်တွေ ပေါတဲ့ ဒီဇင်ဘာလထဲက တစ်ရက်မှာ west coast မှာ ဘာဘီကျူးလေးကင်ပီး အရည်လေးသောက်လို့ တစ်ရက် တွေ့မည် ဖြစ်သောကြာင့် တက်ရောက်မည် ဆိုပါက ကေပီဇက်ဆီ အကြောင်းကြားကြပါနော်)
ကျနော် တခုစဉ်းစားမိလို့ပါ။ စလုံးမှာရှိတဲ့ MEF member စာရင်းလေးပြုစုထားရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်လို့ပါ။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အခုလို ဖိုရမ်ကိုယ်စားပြုလှုပ်ရှားမှုလေးလုပ်တဲ့အခါကျရင်ဆက်သွယ်ချင်လို့ အဓိကပါပဲ။
ကျနော် Google Spread sheet လေးလုပ်ထားပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာတော့ ကျနော် ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အီးမေးတွေကို ထည့်ထားပါတယ်။
တချို့အနေနဲ့ ဒါတွေကိုဖြည့်ဖို့ အခက်အခဲရှိရင်လည်းရှိပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးက ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင် အောက်ကလင့်လေးမှာသွားပြီးတော့ဖြည့်ပေးကြပါခင်ဗျာ။
ကျနော်တို့ MEF ရဲ့ ပါဝင်လှုပ်ရှားမယ့်အတွက်ကိုလဲ ....
CIVIL ENGINEERING SEMINAR SINGAPORE (2010) ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှလဲ ကြိုဆိုကြပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့လဲ ပြောဆိုဆွေးနွေးထားပါတယ်။
CIVIL ENGINEERING SEMINAR SINGAPORE (2010) လှုပ်ရှားသူများကိုယ်စား ကိုကျော်သက်ဦးဆီကလဲ ... တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ရယူထားပြီးပါပြီ။
နို့မဟုတ်ရင် ... မကောင်းဘူး ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါ။
အောက်က quote လေးက ကိုကျော်သက်ဦးဆီက ရထားတဲ့ message လေးပါ ။
Hi, Ko Thura, I have seen ur forum n it is very nice.
I have informed one of our leading committee member n about ur team participation.
If u wanna distribute ur forum brochure, we r fine.
Ur participation is welcome.
Cc to Ma Aye Mar Mar.
ကျနော်တို့ MEF ကိုယ်စားပါဝင်နိုင်ဖို့ရာ စင်္ကာပူက .... စိတ်ပါဝင်စားသူ Forumer များ ၊ Civil Engineer များ ၊ တက်ရောက်နိုင်မယ့်သူများ
ကျနော်ဆီ pm ဖြစ်ဖြစ် ၊ sms ဖြစ်ဖြစ် ပို့ပြီး confirm လုပ်ပေးသွားကြပါ။
ဖိုရမ် nick နဲ့ ဆက်သွယ်လို့ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ် ၊ အီးမေးလေးပါ ထည့်ပေးပါ။
စလုံးက မန်ဘာများ MEF ကိုယ်စားပြု တက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ အလေးအနက်တောင်းဆိုပါရစေ
CIVIL ENGINEERING SEMINAR SINGAPORE (2010) (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,10066.0.html) ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှ ...
ကျနော်ဆီ မနေ့ညနေပိုင်းက ထပ်မံဖုန်းဆက်လာပါတယ်။
MEF (မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်) မန်ဘာများကို သူတို့အခုစုပေါင်းလုပ်နေကြတဲ့ Seminar ကြီး ပိုမိုရှောရှောရှူရှူနဲ့ အောင်မြင်သွားစေဖို့ တဘက်တလမ်းမှ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးဖို့ရန် တရားဝင်အကူအညီ တောင်းခံလာပါတယ်။
အဲ့ဒီကိစ်စအတွက် လာမယ့် တနနေင်္ွနေ့မှာလုပ်မယ့် MEF မန်ဘာတွေ အစည်းအဝေးမှာ အသေးစိတ်တိုင်ပင်ချင်ပါတယ်။
အတတ်နိုင်ဆုံး တက်ရောက်ဖြစ်အောင် တက်ရောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
MEF meeting လေးကို ထပ်မံအသိပေးကြေငြာပေးသွားပါ့မယ်။
အကြမ်းအားဖြင့် လာမယ့် တနေင်္ဂနွေနေ့ ညနေ ပိုင်းလောက်လုပ်ဖို့မှန်းထားပါတယ်။
အခုလို နိုင်ငံအဆင့် ဆရာကြီးတွေကြီးမှူးပါဝင်တဲ့ ......
နည်းပညာ ၊ knowledge &amp; experience တွေ မျှဝေမယ့် .......
အကုန်အကျအများကြီး အိတ်စိုက်လုပ်ကြတဲ့ .....
တခမ်းတနား အကြီးအကျယ်လုပ်ကြတဲ့ ......
အခုလို ပွဲကြီးတခု မှာ ကျနော်တို့ MEF ကို အားကိုးတကြီး အကူအညီတောင်းလာခဲ့တဲ့အတွက် ကျနော်အနေနဲ့တော့ MEF ကိုယ်စား အင်မတန်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
MEF ကိုနည်းပညာဖိုရမ်အဖြစ်ပြောင်းလဲနေကြတဲ့ ကျနော်တို့တတွေအတွက်တော့ လမ်းကြောင်းတခုအဖြစ် လူပိုသိအောင်လုပ်နိုင်တော့မှာမို့လို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
တခြားနယ်ပယ်အသီးသီးမှ မန်ဘာများကလဲ ယခုကဲ့သို့ ကြုံကြိုက်လာခဲ့ရင် ဖိုရမ်ကိုယ်စားပြုလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ ....
ဆရာကြီး ဦးညီလှငယ် ၊ ဆရာကြီးဒေါက်တာထင်အောင် ၊ ဆရာကြီး ဦးခင်မောင်တင့် စတဲ့ တခြားဆရာကြီးများနဲ့ တခြား အာစရိယပူဇော်ပွဲတက်ရောက်လာကြမယ့် ဆရာအားလုံးကိုလဲ ...
MEF အကြောင်း ပိုပြီးအသေးစိတ်ကျကျ အသိပေးပြီး ဆရာတွေဆီကနေတဆင့် ဆရာတွေရဲ့တပည့်တွေဆီအထိ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိစေရန် ကျနော်ဆောင်ရွက်ပါ့မယ်။
ကျနော်တို့ စင်္ကာပူမှ တခြား MEF မန်ဘာများအနေနဲ့လဲ Civil Engineer များမဟုတ်ကြပါသော်လည်း MEF တခုလုံးရဲ့အရေးအဖြစ် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ၀ိုင်းဝန်းပါဝင်ကြဖို့ ထပ်မံ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ... ။
အခုလက်ရှိ MEF ဖိုရမ်ကိုယ်စားပြုပြီး အမာခံ ပါဝင် ကူညီလှုပ်ရှားကြမယ့် သူများကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
1. Tun Aung Kyaw
2. John Moe Eain + 1
5. Soe Soe Yee
9. ဝေယံမင်းနိုင် ( လာနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ အလုပ်အနေအထားအရ Duty ရှိနေပါက ပျက်ကွက်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။)
12. pargyi ( နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာနိုင်ပါမယ် )
16. chit tee
အားလုံးအခုလို ဖိုရမ်အတွက်ဆိုတာနဲ့ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ပေးမယ်ဆိုကြတဲ့အတွက် MEF ကိုယ်စား ၊ အားလုံးကိုယ်စား
အထက်ပါ လူစားရင်းများထဲမှ အွန်လိုင်း register မလုပ်ရသေးသူများ ကျနော့်ကို စာချွန်လွှာနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ၊ email နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ၊ sms နဲ့ဖြစ်ဖြစ် လှမ်းပြောပေးကြပါဗျာ။
Civil Major မဟုတ်တဲ့ အသင်းဝင်များအနေဖြင့် ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်နိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
လာမဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ (14.11.2010) မှာ အဲဒီအတွက် အစည်းအဝေးကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းကျင်းပပါ့မယ် ခင်ဗျာ။
Jurong East MRT အနီး တနေရာမှာ တွေ့ဆုံပါမယ်။ Jurong East MRT ကိုရောက်လျှင် ဖုန်းဆက်၍ နေရာကိုမေး နိုင်ပါတယ်။
အချိန်ကတော့ နေလည် ၂ နာရီဖြစ်ပါတယ်။
MEF ဆိုတဲ့ နာမည်လေးကို လူအများသိအောင်လုပ်ခွင့်ရတဲ့ အခွင့်အရေးမို့လို့ ပါဝင်ကူညီပေးမဲ့ မင်ဘာအားလုံးကိုလည်း အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ထပ်လောင်းပြောပါရစေခင်ဗျာ။
Jurong East MRT ကနေ လမ်းညွှန်မြေပုံဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Blk 134 Food court မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူရှေ့ကလမ်းကတော့ Jurong East Central လမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်က အဲဒီလမ်းဖက်ကို မျက်နှာမူထားပါတယ်။ overhead bridge လေးရှိတဲ့နေရာပါ။
14.11.2010 တနင်္ဂနွေနေ့ .......
အချိန်ကတော့ နေ့လည် ၂ နာရီပါ။
ဖိုရမ်အမှတ်တရ တီရှပ်လေး နမူလုပ်ကြည့်တာပါ
လက်မောင်းမှာတော့ www.myanmarengineer.org ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေးထည့်ပါမယ်
အားလုံးမြင်သာအောင် ပုံပြန်ပြင်ထားလိုက်ပါတယ်။ [br] ရာမညဖိုးလပြည့်
ဖိုရမ်အမှတ်တရ တီရှပ်လေး နမူလုပ်ကြည့်တာပါ
- လက်မောင်းမှာရှိမယ့် စာတမ်လေးနဲ့ရင်ဘတ်မှာရှိမယ့် MEF လေးက ချည်နဲ့ထိုးတာတာလေးဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဈေးနှုန်းက အများကြီးမတက်သွားဘူးဆိုရင်ပေါ့။ ရေရှည်အတွက် ခံ တာပေါ့နော်။
ချည်နဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် ပိုကုန်ကျနိုင်မယ်ဆိုတာလေး လဲသိရရင်ကောင်းမယ်။
- နောက်ဘက်က တံဆိပ်ကတော့ အနည်းငယ် Size ကိုလျှော့ပြီး အပေါ်ဘက် (ပခုံးဘက်ကို) နည်းနည်းတိုးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
ဒါနဲ့ အခုတင်ပေးထားတဲ့ စပို့ရှပ်ပုံလေးကြည့်ရတာ အမျိုးသမီးဝတ်ထင်တယ်နော်။
ဖိုရမ်အမှတ်တရ တီရှပ်က မKPZ နမူနာပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်းဆိုရင်တော့ တော်တော်ကောင်းပါတယ် ။
ကိုချစ်တီးပြောသလိုပဲ ချည်လေးနဲ့ ထိုးမယ် ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတင့်တယ်သွားမှာ အမှန်ပဲ ....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖိုရမ်အတွက် အမြဲအထိမ်းအမှတ် တီရှပ်လေး ဆိုတော့ ဈေးနှုန်းကို ခဏ ထားပြီး ကောင်းကောင်းလေး ဖြစ်စေချင်မိပါတယ် ။
နောက်ကျောဘက်က တံဆိပ်လေးကိုနဲ့ကျွန်တော်အမြင် လေးထောင့် ထောင့်ကျကျ ဖြစ်မနေအောင် ကာလာဖျော့ဖျော့ နဲ့ ဆိုပိုကြည့်ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်လေးပါ ။
ဖိုရမ်မိတ်ဆက်စာအုပ် - စာမျက်နှာ ၂၀ ခန့်ရှိတဲ့ စာအုပ်လေးကို ပြုလုပ်ပြီးတော့ Seminar ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဆရာကြီးများကိုအဓိကထားပြီး MEF ကို မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ အလှုငွေထည့်ဝင်တဲ့ပမာဏအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ စာအုပ်အရေအတွက်ကို ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Seminar တက်လာတဲ့သူတိုင်းကိုတော့ စာအုပ် ဝေပေးဖို့ရာမသေချာပါဘူး။
ဖိုရမ်မှ ကောင်းနိုးရာရာပို့စ်များရွေးချယ်၍ CD ပြုလုပ်ခြင်း - စာအုပ်အနေနဲ့ အားလုံးကိုဝေမပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဖိုရမ်မှကောင်းနိုးရာရာ ပို့စ်များကိုရွေးထုတ်၍ CD ရိုက်ပြီး ဖြန့်ဝေပေးပါ့မယ်။
ဖိုရမ်အထိမ်းအမှတ် sport-shirt - ဖိုရမ်အထိမ်းအမှတ် sport-Shirt ကတော့ လိုချင်တဲ့သူများကို ရောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Seminar တက်မဲ့သူတွေတော့ မဖြစ်မနေ ၀ယ်ကြပါလို့ :4: :4:
ဖိုရမ်ကီးချိန်း - ဒါလေးကိုလည်း အလကားဝေပါ့မယ်။
စာအုပ်လုပ်ဖို့နဲ့ အင်္ကျီ အတွက် မKPZ ကနေပြီးတော့ တာဝန်ယူထားပါတယ်။ CD အတွက်ပို့စ်ရွေးချယ်တာကိုတော့ ကိုထွန်း ( Mechanical &amp; Electrical Engineering မှာရှိတဲ့ပို့စ်တွေကို အနှစ်ချုပ်လေးလုပ်ပေးပါရန်) ၊ ကိုလိပ်ကြီး ( Sanitary အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပို့စ်ထဲမှ အချောပြန်ရေးပေးရန်) ၊ ကိုဖိုးတာ ( Aircon နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ် ရေးသားပေးရန် ) အစရှိသဖြင့် တာဝန်ခွဲထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုက Civil Engineering အောက်မှာရှိတဲ့ပို့စ်ထဲက Pile Foundation အကြောင်းကိုပဲထည့်ပါ့မယ်။ AutoCAD ခေါင်းစဉ်မှာတော့ ကိုပါကြီးရဲ့ AutoCAD rendering အကြောင်းကို PDF file (ပန်းလေပြေ လုပ်ထားတာထင်တယ်) လေးကိုစိတ်ကူးထားပါတယ်။ နောက်ထပ်ထည့်ချင်တာလေးတွေ ရှိခဲ့ရင်လည်းပြောပါ။
သော့ချိတ်ကိုတော့ ရန်ကုန်က သိုးကျောင်းသား ကနေ လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ကိုတာယာပွလေးတို့ ဇနီးမောင်နှံကို သယ်လာပေးပါရန် ဒီနေရာကနေပဲ အကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Civil Engineering Seminar ကို ကူညီပေးမဲ့ နောက်ထပ် အသင်းဝင်များစာရင်းကတော့
၁၉။ ကိုဖိုးတာ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
စကားချပ်။ ။ sport-shirt ကျောဖက်ဒီဇိုင်းကို လေးထောင့်ပုံစံရှိတဲ့ အောက်ခံအရောင်ကိုဖျောက်လိုက်ပြီးတော့ &quot; မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် &quot; စာသားကို အပြာရင့်ရောင်လေးပြောင်းလိုက်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကမ္ဘာလုံးပုံရဲ့ပေါ်မှာ စက်ဝန်းပုံစံ နဲ့ www.myanmarengineer.org (http://www.myanmarengineer.org) ဆိုတဲ့ လိပ်စာလေးထည့်လိုက်ရင်ကောင်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
T-shirt design လေးက တော်တော်လှပြီး သပ်ရပ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နောက်ကျောဘက်ကို ကိုထွန်းအောင်ကျော် ပြောသလိုလေးဆို ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် အမခိုင်။
အဲဒါဆိုရင် လင့်ခ်လေးလည်း ကြေငြာပြီးသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။
နောက်ခံ အရောင်ကို ဖျော့လိုက်ရင် လေးထောင့်ကွက်ကိုကွင်းကွင်းကြီး မမြင်ရတော့ ပိုကြည့်ကောင်းမယ်ထင်လို့ပါ။
မိန်းကလေး size ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်..အဟီးးးးလိုချင်လိုက်တာ။
ဒါဆို သာမီးတို့ မြန်မာပြည်က ရကြဘူးပေါ့နော် :( :(
ကီးချိန်းကို ရန်ကုန် နဲ့ နေပြည်တော် ဝေဖို့ တတ်နိုင်သလောက် နေညို လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ယောက်ျားလေးဝတ် နဲ့ မိန်းခလေးဝတ်ဆိုပြီး စတိုင် ၂ မျိုးထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတိုင်း ထပ်တူထုတ်လုပ်သွားဖို့ နမူနာအဖြစ် မြန်မာပြည်ကို တစုံစီပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်ကိုတော့အခု လက်ရှိ ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့ ပုံစံအတိုင်းဘဲ အဖြူရောင်လေးဘဲ MEF Uniform အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
T-Shirt (ကော်လာမပါရင်) free style ဖြစ်ပေမယ့် .....
အခုလောလောဆယ်တော့ ယခုပွဲလေးနဲ့ ပိုပြီး လိုက်ဖက် ဖက်ရှင်ကျစေမယ့် formal Style အဖြစ် Polo (Sport) Shirt လေးအဖြစ်အရင်ထုတ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြလိုက်တာပါ။
နောက်များမှာတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလှုပ်ရှားမှုများအတွက် Free Style အဖြစ် MEF T-Shirt များကိုလဲ ထုတ်လုပ်ကြသေးတာပေါ့ဗျာ။
ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ ... ... ... :ok :ok :ok
ဆရာချစ်ရေ ယူနီဖောင်းဖြစ်သွားအောင် ဒီဇိုင်းကိုလည်း ဆော့ဖ်ကော်ပီလေး တစ်ပါတည်းထည့်ပေးရင် ပိုကောင်းပါမယ်ခင်ဗျ .. .. .. ဒါဆိုရင် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းအရ ဘယ်ပဲရောက်ရောက် အရောင်တူနေတဲ့ MEF ဖြစ်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာ ... .. .
၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားပေးသူများကို အထူးကျေးဇူးတင်လျှက် ... .. .
:7: :7: :7: နဂါးစစ်သည် ;D ;D ;D
ဆွေးနွေးထာကြလေးတွေ ကောင်းပါတယ်.. တက်တက်ကြွကြွ လုပ်နေတာ မြင်ရတော့လည်း ပျော်စရာကြီးပါလား... စလုံးမှာသာ နေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ကျနော်လည်း တတတ်တအား လုပ်အားပေးဖြစ်မှာပါ...
ဒီထဲမှာ ကျနော် အကြံပြုချင်တာလေး တခု ရှိလို့ပါ..
Banner နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုထားတာ မတွေ့မိဘူး.. ဆွေးနွေးပြီးသားလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. banner လေး တခု ၂ခု ချိတ်တာလည်း အကျိုးရှိမယ် ထင်ပါတယ်... ဟောပြောမဲ့ သူတွေ နဲ့ မနီးမဝေး (ဖြစ်နိုင်ရင် speaker stand ရှေ့တည့်တည်ှု) မှာ ချိတ်နိုင်ရင် ဟောပြောတဲ့သူတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်တိုင်း သူတို့ ဓါတ်ပုံတိုင်းမှာ ပေါ်နေမှာဘဲ... အလကား ကြော်ငြာနိုင်တာပေါ့... :4:
စာလုံး ခပ်ကြီးကြီးနဲ့ www.myanmarengineer.org ဆိုတဲ့ web address လေး ဆိုရင်ကို သတိထားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်... သူတို့ ဓါတ်ပုံတွေကို ဘယ်သွားတင်တင် ဖိုရမ် address ကြီး ပေါ်နေမှာပေါ့နော်..
ဆွေးနွေးထားပြီးသား အဆင်မပြေလို့ မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့လည်း ထားခဲ့ရမှာပေါ့...
ကျနော် မလုပ်တတ်ပဲနဲ့ လျှောက်စမ်းရာကနေ ဒီပုံလေးတော့ထွက်လာပါတယ်။
MEF ကိုသိသာစေမယ့် Poster လိုမျိုးကို ဆိုင်းဘုတ်လိုမျိုး တခုခု ကိုချိတ်ဆွဲတာဖြစ်ဖြစ် ထောင်ထားတာဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒါကို ဆိုလိုတာထင်ပါတယ် ...
အခုလိုအကြံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဖိုးဇော်ရေ ....
ဒါပေမယ့် ဒီပွဲလေးကို အစစအရာရာ စပွန်ဆာပေးပြီးတော့ ကျနော်တို့ MEF အနေနဲ့ကြီးမှူးကျင်းပတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ....
အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ရန် အတွက် သိပ်အဆင်မပြေဘူး။
အခုလောက်အထိ ကျနော်တို့ MEF ကို ဖိတ်ခေါ်အကူအညီတောင်းပြီး ၊
ဖိုရမ်အနေနဲ့ MEF ၀တ်စုံလေးတွေနဲ့ ပါဝင်လှုပ်ရှားခွင့် Key Chain ဝေငှခွင့် ၊ ဖိုရမ်ကိုကြော်ငြာမယ့် အနှစ်ချုပ်စာစောင်လေးတွေ ဝေငှခွင့်ပေးတာနဲ့တင် လုံလောက်ပါပြီ။
နို့မဟုတ်ရင် အခွင့်အရေး အရမ်းယူသလိုဖြစ်သွားမှာ MEF ကို အထင်အမြင်လွဲသွားမှာကိုလဲ မလိုလားလို့ပါ။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပွဲကြီးနဲ့အတူ MEF ဆိုတာကို လူသိပိုများလာပြီး ၊ အကျိုးရှိမယ့် မန်ဘာအသစ်တွေ ထပ်ရရှိလာကာ Knowledge Sharing အတွက်အတိုင်းအတာတခုအထိ ပိုပြီးထိရောက်လာမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။
MEF ကကြီးမှူးကျင်းပမယ့်ပွဲတွေကျရင်တော့ အပြတ်လုပ်ပါ့မယ် .... စိတ်သာချဗျာ :7:
အားလုံးပဲ ဆက်လက်ချီတက်ကြပါလို့ပြောပါရစေ..အခုတောင် အချိန်လုပြီးရေးလိုက်တာပါ...
ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို တော့ ပြောထားပြီးပါပြီ...ကိုချစ်သီးနဲ့တစ်ကွ အားလုံးတိုင်ပင်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ
ကျွန်တော် တတ်နိုင်သမျှ ကူပါ့မယ်..အခုတစ်လောမှာတော့ ကျွန်တော် ၀င်မဆွေးနွေးနိုင်သေးလို့ပါ..
အလုပ်တွေ နဲ့ ကျန်းမာရေး ကိစ္စလေးတွေရှိနေလို့ပါ..ကိုထွန်းအောင်ကျော်က ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ပေးရမယ့်
ကိစ္စတွေ ရှိလာရင် ကိုယ်စား တာဝန်ယူ ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့လဲ အကူအညီ တောင်းထားပါတယ်။..
အားတက်သရော ၀င်မဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အတွက် အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ :)
အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမယ့်နေ့ကြရင်တော့ ဖြစ်အောင် လာရမယ်နော် :7: :2:
(အစီအစဉ်မစခင် ခပ်စောစောပေါ့ .... ကြိုတင်လမ်းကြောင်းရှင်းထားလို့ရအောင်လို့)
ကျမတို့ လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ အထဲကနေ ပထမဦးဆုံး အကောင်အထည်ပေါ် အောင်မြင်သွားတာကတော့ ဖိုရမ်အထိမ်းအမှတ် တီရှပ်ပါ။
အကျီအသားက ပိုလိုတီရှပ် အပါးသားပါ။ ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ ချွေးစုတ်လောက်တဲ့ အသားမျိုးပါ။
ကျောဘက်မှာကတော့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်လုပ်ပေးထားတဲ့ လိုဂိုဒီဇိုင်းကို A4 ဆိုဒ်အရွယ်ပုံနှိပ်ထားပါတယ်။
ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်နားမှာတော့ MEF ဆိုတဲ့စာသားကို အမြင့် ၂စင်တီမီတာလောက်ကို ကိုချစ်သီးပြောသလို ချည်ဖောက်ရေးထိုးထားပါတယ်။
လက်မောင်းနှစ်ဘက်လုံးမှာတော့ www.myanmarengineer.org ဆိုတဲ့စာသားကို အမြင့် ၁စင်တီမီတာ အမြင့်နှင့် ချည်ဖောက်ရေးထိုးထားပါတယ်။
ထိုစာလုံးတွေရဲ့ အရောင်ကတော့ Sky Blue အပြာလွင်လွင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(ခဏနေရင် ကျမ Size Chart တင်ပေးပါမယ်။ မိမိလိုအပ်တဲ့ ဆိုဒ်နဲ့ အရေအတွက်ကို စလုံးမန်ဘာများနှင့် အခြားသော တိုင်းပြည်များမှ လိုချင်သော မန်ဘာများ မပျက်မကွက် ဖြည့်ဆည်းပေးစေလိုပါတယ်။)
စလုံးမန်ဘာတွေအတွက် အရေအတွက် ၃၀ မှာထားပါတယ်။ စလုံးမန်ဘာများကို ဈေးနှုန်း ၃၅ကျပ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ထိုထဲမှ တစ်ထည်ကို မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတွင် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေရန် နမူနာပေးပို့မည် ဖြစ်ပါတယ်။
အမ KPZ ရေ...
MEF တီရှပ်လေး ၀တ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို ကြွားချင်စမ်းပါဘိ... ;) ;) ;)
MEF စီဒီအတွက် စာမူပေးရမဲ့ ကိုလိပ်ကြီးနဲ့ ကိုထွန်း အလုပ်တွေများရှုပ်နေကြလားမသိဘူးနော်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံနှင့် အခြားသောနိုင်ငံမှ ဖိုရမ်အသင်းဝင်များ အကျီများ စတင်မှာယူနိုင်ပါပီ
အောက်တွင်ရှိသော Size Chat မှတစ်ဆင့် မိမိနှင့် သင့်လျော်သော လိုအပ်သော ဆိုဒ် နှင့် မှာယူလိုသော အရေအတွက်ကို တွဲဖက်ပါ Excel SpreadSheeds တွင် ဖြည့်စွက်ပေးပါ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ အသင်းဝင်များမှာ 171-46903-1(POSB Saving) သို့ ကျသင့်ငွေကို လွှဲပေးနိုင်ပါတယ်။
လွဲပီးပါက လွဲလိုက်သော ရက်စွဲကို Excel SpreadSheeds တွင် Update လုပ်ပေးပါ။
အခြားသောနိုင်ငံမှ မှာယူလိုသော သူများကို စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ပို့ပေးမည် ဖြစ်သောကြောင့် လိပ်စာအတိအကျကိုပါဖြည့်စွက်ပေးပါ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှသူများအတွက် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၅ ကျပ်သတ်မှတ်ထားပီး အခြားတိုင်းပြည်မှ သူများအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၅(ပို့ခပါ ထည့်တွက်ထားပါတယ်)
အခြားသောနိုင်ငံမှ သူများမှ Paypal မှတစ်ဆင့်ပေးချေနိုင်ပါတယ်။ paypal သို့ khinephyuzaw@ymail.com သို့လွှဲပေးနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ အသင်းဝင်များမှ ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယအပတ်ခန့်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အသင်းဝင်များထံတွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
size chat ပုံထည့်ပေးခြင်း, chit tee
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှသူများအတွက် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၅ ကျပ်သတ်မှတ်ထားပီး အခြားတိုင်းပြည်မှ သူများအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၅(ပို့ခပါ ထည့်တွက်ထားပါတယ်)
ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာက လူတွေအတွက် ကန် ဒေါ်လာ ၃၅ ပေါ့နော်..
ကျနော် မနေ့ ညက email ပို့ထားလိုက်ပါဘီ။
ကျနော် sanitary ကိုမပြင်ပဲ ဒီအတိုင်း ဆွေးနွေးထားတဲ့ အတိုင်းပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အချိန် မရတာရယ် နောက် ဒီအတိုင်းလေးဆို ဖတ်တဲ့ လူတွေ တမျိုးလေး ဖြစ် အောင်လို့ ပါ။
ကျနော် မူရင်း MS Word ဖိုင်ပါတင်ပေးလိုက်ပါ၏ အကယ်၍ ဦးလေး မကြိုက်ရင် ကျုတ်ကျက်လိ လိုက်ပါခင်ဗျား
အခြားသောနိုင်ငံမှ မှာယူလိုသော သူများကို စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ပို့ပေးမည် ဖြစ်သောကြောင့် လိပ်စာအတိအကျကိုပါဖြည့်စွက်ပေးပါ။
အခြားတိုင်းပြည်မှ သူများအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၅(ပို့ခပါ ထည့်တွက်ထားပါတယ်)
အကျီ င်္က 35 ဒေါ်လာတောင်လားဟင် ... :(
ရက်စက်လှချေလား .. :&#039;(
၂ ရက်လုပ်မှ ၁ ရက်စားရပါတယ် ဆိုနေ .. :&#039;( :&#039;(
သက်ဆိုင်ရာ အသင်းဝင်နာမည်ကို ပြောဦးလေဟ M;
စင်္ကာပူနိုင်ငံနှင့် အခြားသောနိုင်ငံမှ ဖိုရမ်အသင်းဝင်များ အကျီများ စတင်မှာယူနိုင်ပါပီ
အောက်တွင်ရှိသော Size Chat မှတစ်ဆင့် မိမိနှင့် သင့်လျော်သော လိုအပ်သော ဆိုဒ် နှင့် မှာယူလိုသော အရေအတွက်ကို တွဲဖက်ပါ Excel SpreadSheeds တွင် ဖြည့်စွက်ပေးပါ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ အသင်းဝင်များမှာ 171-46903-1(POSB Saving) သို့ ကျသင့်ငွေကို လွှဲပေးနိုင်ပါတယ်။
အခြားသောနိုင်ငံမှ သူများမှ Paypal မှတစ်ဆင့်ပေးချေနိုင်ပါတယ်။ paypal သို့ khinephyuzaw@ymail.com သို့လွှဲပေးနိုင်ပါတယ်။
အမယ်လေး ၀ယ်ယူရမည် ဆိုပါလား............... နေမကောင်းနေလို့ ဆေးခန်းစရိတ်ထောင်းနေပါတယ်ဆိုမှ....
ရက်စက်လှချည်လား...... :angry: :angry: :angry:
ဒီနေ့ ကိုသိုး နဲ့ အနော် ပုရ်ှနဲ့ ကိုကြီးတာရာပွလေး ဆီကို MEF ကီးချိန်း 900 ပို့ ပေးလိုက်ပါပြီ ခင်ဗျာ ..
အွန်လိုင်း မတက်ဖြစ်တာကြာတော့ .. အားလုံး နဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ် .. အမနေညို ဖုန်းဆက်
မှပဲ သတိရတော့တယ် ဟီဟီ ...
ဖိုရမ်မှ မောင်နှမ များကို ထာဝရ ခင်မင်လျက် .. မောင်ပုရှ် ...
သက်ဆိုင်ရာ အသင်းဝင်နာမည်ကို ပြောဦးလေဟ M;
KPZ ပြောထားတာက US$35 သတ်မှတ်ထားတဲ့ တခြားနိုင်ငံများမှ ဆိုတာက စင်္ကာပူနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေကို ဆိုလိုတာပါ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံက မန်ဘာများအတွက် SDG35 ဖြစ်ပြီး ...
မြန်မာနိုင်ငံမန်ဘာများအတွက်တော့ ... စင်္ကာပူကနေ ပို့လိုက်မယ့် နမူနာ ပုံစံ ၀တ်စုံ ဒီဇိုင်းအတိုင်း မြန်မာပြည်မှာထုတ်လုပ်ပြီးမှ .... ဈေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အီး ... 35 $ ဆိုပါလား ... :angry:ဟီး ... လုပ်ကြပါဦး Discount ရာသီ မှ ဝယ်တော့ မယ်လေ .... :? :? :?
Discount ချရင် သာပြောကြပါဗျာ ....ဟီး :4: :4: :4: :4:
စာစောင်တွေအတွက် Page Maker မလုပ်တတ်လို့ရွာလည်နေတယ်ဗျာ။
Microsoft Word နဲ့ PDF ထုတ်ပြီးတော့ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်မလှဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
ကိုချစ်သီးလုပ်ထားတဲ့ Pile Foundation အကြောင်းဆွေးနွေးရအောင် ဆိုတဲ့ pdf က password ပါနေတဲ့ အတွက် AutoRun နဲ့သာလုပ်ရင် password မပါမှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါလေး အဆင်ပြေရင် ပို့ပေးပါဦးဗျာ။
အဲဒါလေး အဆင်ပြေရင် ပို့ပေးပါဦးဗျာ။
Yousendit နဲ့ အခုလေးတင် ပို့ပေးထားပါတယ်။
ကျနော်တို့ MEF အနေနဲ့ပါဝင်ကြမယ့် လူစာရင်းအတိအကျလေး ကျနော့်ဆီပို့ပေးပါအုံး။
လုပ်အားပေးမယ့်သူတွေအတွက် သူတို့ ကော်မတီအဖွဲ့က ရင်ထိုးစီစဉ်ပေးဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့မှာ ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သိရပြီဆိုရင် ပြောပါဦး...
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလဲ ဘာတွေလုပ်ထားရမယ်ဆိုတာ အစီအစဉ်လေးလုပ်ထားလို့ရအောင်လို့...
အကိုရေ ကျနော်လာဖြစ်အောင် လာပါ့မယ်
၂၀ ရက်နေ့မနက် မှာ ကိုသိုးနှင့် ပုကောင်လေးတို့ လာပို့ သွားသော key chain အခု ၉၀၀ ကို အားလုံးသယ်ယူနိုင်အောင် ကြိုးစားပေမယ့် လေဆိပ်ရောက်မှ အခု ၂၃၀ အထုပ်တထုပ်ထားခဲ့ရပါတယ်။( ၂ယောက်စာ ကီလို ၆၀သယ်ယူခွင့်ရှိတာမှာ ကီလို ၅၀ က လူကြုံပစ္စည်းများ ချည်းပဲ ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ :&#039;( ) ဒါ့ကြောင့် ဖိုရမ်က စီနီယာ အကိုတယောက်ကပြောခဲ့တာနေမှာ.. ရန်ကုန် စင်္ကာပူ ခရီးစဉ်မှာ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးပစ္စည်း က လူကြုံပစ္စည်း ဆိုပီးတော့လေ.. :angry: :angry: :angry:
ခု ပါရှိလာသော key chain များကို အိမ်မှာ မပျောက်မပျက် အောင်သေချာထိမ်းသိမ်းထားပါတယ်... လာယူမည့် အချိန်မှာ ကျွန်တော် သို့မဟုတ် ကျွန်တော့် မဟေသီ( အသစ်စက်စက်) :shy ကိုဖုန်းကြိုဆက်၍ လာယူနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျား... :) :) :)
ရန်ကုန်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ၂၃၀ အထုပ်ကို ၈၃၊ ဓမ္မသုခ အပြင်လမ်း၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရှိ မအေးအေးမွန် (ဖုန်း- ၆၃၆၂၀၃၊ ၇၃၀၃၇၆၁၆) မှာ အပ်နှံထားခဲ့ပါတယ်။ MEF မှ တယောက်ယောက်လာယောက်တောင်းဆိုပါက ပေးလိုက်ရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ...
အဲဒီနေ့မှာ ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သိရပြီဆိုရင် ပြောပါဦး...
ကျနော်တို့ MEF အဖွဲ့က သူတို့ Civil Seminar ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့သားများနဲ့အတူ ၀ိုင်းကူလုပ်ပေးရမယ့် အပိုင်းကတော့ ....
- Seminar တက်ရောက်လာကြမယ့် သူတွေ register လုပ်တဲ့အပိုင်း
- ဆရာကြီး ဦးညီလှငယ် ၊ ဆရာကြီး Dr ထင်အောင်နဲ့တကွ တခြားဆရာ၊ ဆရာမတွေ၊ ဖတ်ခေါ်ထားတဲ့ ဧည့်သည်တော်များကို နေရာချထားရေး နဲ့ ကျွေးမွေးမယ့်အပိုင်း
- သူတို့အဖွဲ့က လူတွေနဲ့အတူ နောက်ထပ် Seminar တွေထပ်မံလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ကောက်ခံမယ့် စေတနာရှိသလောက်အလှူငွေကောက်ခံပေးမှု အပိုင်း
- နောက်ပြီး ဟောပြောစဉ်မှာ ပွဲအစ အဆုံး Video မှတ်တမ်းမှုများရှိပါကလဲ ဟောပြောမယ့်သူတွေရဲ့ အလုပ် Confidential ဖြစ်မှုအရ နဲနဲပါးပါး ထိန်းသိမ်းပေးရေးအပိုင်း ...
ပိုပြီးအသေးစိတ် တာဝန်ခွဲဝေမှုကိုတော့ ဒီကြားထဲ ထပ်လုပ်မယ့် အစည်းဝေးကျရင် ထပ်မံပြီး အသိပေးပါ့မယ်။
ဒီနေရာလေးမှာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,10066.msg68759.html#msg68759) .... Seminar တက်မယ့်သူတွေအတွက် confirmation email ပြန်လည်ပို့ပေးဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
စင်္ကာပူက MEF အနေနဲ့ ကိုယ်စားပြုပြီး ပါဝင်လှုပ်ရှား ကြမယ့် သူများ အောက်ကလင့်ထဲမှာ ၀င်ရောက်ပြီး
MEF Sport Shirt ၀ယ်ဖို့ အတွက် ဖြည့်ပေးကြပါအုံး ။
LINK : https://spreadsheets0.google.com/ccc?key=tMvxntwZheTnIMskSdaSKfA&amp;hl=en#gid=0
Shirt တန်ဖိုး 35S$ လွှဲရမယ့် A/C ကတော့ KPZ 171-46903-1(POSB Saving) ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်စိများလျှမ်းသွားကြသလား ၊ အလုပ်တွေရှုပ်နေကြသလား လို့ပါ။
အမာခံ အနေနဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ပြောလို့ 20 ကျော် လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ သိရပေမယ့် .... လာလောဆယ်7ယောက်ဘဲရှိပါသေးတယ်။
ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရေ ... ရင်ထိုး အတွက် request လုပ်ထားတဲ့ ပါဝင်မယ့် လူစာရင်း ရဲ့ information (Name; Degree(batch); email) ကိုလဲ ပို့ပေးပါအုံး ။
မ KPZ ရေ မရှင်းလို့ မေးပါရစေ။ T-shirt size ပါခင်ဗျာ။ အမပေးထားတဲ့ List အရဆိုရင် Small size က Shoulder က 18&quot; ဆိုတော့ နားမလည်ဘူးဖြစ်နေလို့ဗျ။ ပုံမှန်ဆို ကျွန်တော်က ( ဥပမာ Giordano ) ဆိုရင် Small size ပဲဝတ်ပါတယ်။ Pig ဆိုပေမယ့် Small Pig ပါ။ :4: :4: :4: ပြီးတော့ G-2000 ကဆိုရင် Shoulder က 15 1/2 &quot; ပဲ။ အဲဒါကို Small size လို့ထင်လို့လေ။ အမတင်ပေးထားတာက ချုတ်မယ့်ဆိုင်က size လားမသိဘူး။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်ပဲနားလည်မှုလွဲနေသလားဗျာ။ ကိုချန်းချန်းက Medium ..... Pigkalay က Small ဆိုတော့ M; ဟာသများဖြစ်နေမလား။ :2: :2: :2: ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကသူငယ်ချင်း ၂ယောက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ထားပါတယ်။ တယောက်က မိန်းခလေးဖြစ်နေတော့ သိချင်တာက မိန်းခလေးတွေကကော Design အတူတူပဲလား။ ကျား Design မ Design ကွာသေးသလားသိပါရစေ။ ခုလောလောဆယ်တော့ စာရင်းသိရအောင် ဝင်ဖြည့်ထားပါတယ်ခင်ဗျား
ဒီနေ့ထိ volunteer အဖြစ်ပါဝင်ကြမဲ့သူများ စာရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထဲက တစ်ချို့ကတော့ အင်္ကျီဝယ်ဖြစ်ချင်မှဝယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တချို့က ဖိုရမ်ဝင်ထားပြီးတော့ မရေးဖြစ်တဲ့သူတွေပါ။ အစက volunteer အရေအတွက်နဲမှာစိုးလို့
[quote author=chit tee link=topic=10080.msg68168#msg68168 date=1289568998]
[color=blue]အခုလက်ရှိ MEF ဖိုရမ်ကိုယ်စားပြုပြီး အမာခံ ပါဝင် ကူညီလှုပ်ရှားကြမယ့် သူများကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
20. pigalay သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်
ကျနော်တို့စဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ထဲမှာ ပါတဲ့ CD ဝေဖို့ကိစ္စကို မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ လက်ရှိအချိန်ထိ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းထားတဲ့ငွေက SGD 450 လောက်ပဲရှိတဲ့အတွက် CD လုပ်ဖို့ရာအဆင်မပြေပါ။ ဖိုရမ် မိတ်ဆက်စာအုပ်အရေအတွက်ကိုတောင်မှ မူလ မျှော်မှန်းထားတဲ့အရေအတွက်အတိုင်းရိုက်ဖို့ အဆင်မပြေနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ အဲဒါအပြင် အခုအချိန်အထိ ထည့်ရမဲ့စာစောင်အရေအတွက်ကလည်း နည်းလွန်းလှပါတယ်။ ကိုဇင်မောင်ထွန်းပို့ထားတဲ့ Aero နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာစောင် ၆ ခု၊ Pile foundation အကြောင်းတစ်ခု၊ Sanitary အခြေခံသဘောတရားများ တစ်ခု၊ စုစုပေါင်း ၈ စောင်ပဲ ရှိတဲ့အတွက် လုပ်ဖို့ရာ အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်း ဒီနေရာလေးကနေ အသိပေးအပ်ပါတယ်ဗျာ။
အမှန်ကတော့ ဒီတပတ် တချက်လောက်တွေ့ဖြစ်ကြလိုက်ရင် ပိုကောင်းမှာ ...
ကျနော် အလုပ်ရှုပ်နေလို့ မစီစဉ်ဖြစ်လိုက်ဘူး မေ့သွားလို့ပါ။
မိဘတွေအလည်ရောက်နေကြလို့လိုက်ပို့ပေးနေရတာရယ်၊ ရုံးအလုပ် Site ကိစ်စတွေရယ်၊ Seminar Trophy Logo အတွက်အကူအညီတောင်းလို့လုပ်ပေးနေရတာတွေရယ်နဲ့ တကယ့်ကိုမေ့သွားလို့ပါ။ အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့ 12 Dec 2010 (Sunday) လှုပ်ရှားကြမယ့် အစီအစဉ်လေးကို ဒီမှာဘဲ ပြောလိုက်ပါတော့မယ်။
၁) MEF ကိုယ်စားပြုပါဝင်လှုပ်ရှားကြမယ့် စာရင်းပေးထားကြသူများ ...
မနက် ၈ နာရီထက် ပိုနောက်မကျဘဲ Dover MRT (အစိမ်းလိုင်း) ကိုအရောက်လာကြပါ။
ကျနော် (98216 443)ဆီဖြစ်ဖြစ် ကိုထွန်းအောင်ကျော် (9851 7195) ဆီ ... လှမ်းအကြောင်းကြားပေးပါ ။
၂) ကျနော် နဲနဲပိုစောစောလေး သွားပြီး ၊ လုပ်အားပေးကြမယ့် သူတွေအတွက် တံဆိပ်တွေသွားယူထားပေးပါမယ်။
၃) MEF Sport Shirt ၀ယ်ထားကြသူများကတော့ KPZ နဲ့ဆက်သွယ်ရယူပြီး ၊ ၀တ်လာကြပါ။
၄) Key Chain တွေကတော့ KPZ ယူလာပါလိမ့်မယ် ။ (အဆင်ပြေမပြေပြန်ပေးပါအုံး)
၅) ဝေမယ့် စာစောင်တွေကတော့ ဂျွန်မိုးအိမ် update ထားတာလေးကို စင်္ကာပူဖိုရမ်မာတွေလတ်တလော ကောက်ခံရရှိတဲ့ ဘတ်ဂျက်အရ အစောင် 100 လောက်ဘဲ မှန်းထားပြီး တ၀က်ကို မေဂျာစုံအာစရိယပူဇော်ပွဲကျမှ ဆရာတွေလက်ထဲ ထည့်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။
ကိုထွန်းအောင်ကျော်စီစဉ်ပြီး ယူလာပေးပါ။ (အဆင်မပြေတာရှိရင်လဲ ပြန်ပြောပါ)
၆) နောက်တခုအသိပေးလိုတာက ကျနော်တို့ MEF ကိုယ်စားပြုလှုပ်ရှားကြမယ့်သူတွေအတွက် Confirmation Email ပြန်ပို့ပေးစရာမလိုပါ။ တကယ်လို့ ပြန်ပို့ထားသူများရှိပါကလဲ ပြသာနာမရှိပါ။
၇) အဲ့ဒီနေ့ကျရင်တော့ MEF ကိုယ်စားပြုလှုပ်ရှားမှုအတွက် ဗွီဒီယို နဲ့ ဓါတ်ပုံများ မှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက် konge က ဦးစီးပြီး စီစဉ်စေချင်ပါတယ် ။ KPZ ၊ Phyo တို့လဲ ကင်မရာယူလာကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်လဲယူလာခဲ့ပါမယ်။
တခြားမရှင်းတာများရှိရင် (သို့) ကျနော်လိုသွားတာတွေရှိရင်လဲ ပြောကြပါ။
ဆရာချစ်ရေ..ကျွန်တော်ကတော့ ဒါဆို ဗွီဒီယို ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ပဲခေါင်းထဲထည့်ထားလိုက်တော့မယ်နော်..ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဝင်မပါတော့ဘူး။ တစ်ခုလောက် request လုပ်ပါရစေ..အဲသည်နေ့ကျရင် ကျွန်တော့်ကို assist လုပ်ဖို့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လောက်ခေါ်လာချင်ပါတယ်။ ဖြစ်မလားခင်ဗျာ..။
ဆရာချစ်ရေ..ကျွန်တော်ကတော့ ဒါဆို ဗွီဒီယို ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ပဲခေါင်းထဲထည့်ထားလိုက်တော့မယ်နော်..ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဝင်မပါတော့ဘူး။ တစ်ခုလောက် request လုပ်ပါရစေ..အဲသည်နေ့ကျရင် ကျွန်တော့်ကို assist လုပ်ဖို့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လောက်ခေါ်လာချင်ပါတယ်။ ဖြစ်မလားခင်ဗျာ..။
ရပါတယ်ဗျာ ... အဲ့ဒီကိစ်စဘဲ လုပ်ပေးပါ။ သူငယ်ချင်းတယောက်ခေါ်လာလဲရပါတယ်။ ကျနော်စီစဉ်လိုက်ပါ့မယ်။
အားလုံးလှဖို့ကတော့ တာဝန်ယူရမယ်နော် ... :p
တခုတော့ အသိပေးပါရစေ ... ။
ဟောပြောကြမယ့်သူတွေရဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ သူတို့ Company တွေရဲ့ data တွေပါမှာ ဖြစ်လို့ ... သူတို့ဟောပြောနေတာတွေကိုတော့ အစအဆုံး ရိုက်ခွင့်မပြုဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ကျနော်တို့ ၀ိုင်းကူညီပေးရမယ့်အချက်တွေထဲမှာလဲ ... ဟောပြောသမျှ အစအဆုံး ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်မည့်သူများတွေ့ပါကလဲ တားဆီးပေးရမှာမို့ပါ။
မှတ်တမ်းတင်ဖို့ကိစ်စအတွက် konge တာဝန်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ စိတ်ချသွားပါပြီဗျာ ....
ဒီနေရာလေးမှာပဲ ရေးလိုက်ပါမယ်။ နေညို ဖိုရမ် အတွက် ကျန်သော အလှူငွေများကို ဘဏ်စာအုပ်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
နေညို့  ၏ ညံ့ဖျင်းမှု့ကြောင့် ဘဏ်စာအုပ်က နေညို့ နာမည် နဲ့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ မေးကြည့်တော့
ဘယ်အဖွဲ့အစည်းအတွက်မဆို ထောက်ခံစာပါရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ပိုက်ဆံအများကို လက်ထဲမထားချင်လို့ အဆင်ပြေသလိုပဲလုပ်ပေးထားပါတယ်။
အဲဒီအတွက်လည်း အိုင်ဒီယာလေးများရှိ၇င် ပေးကြပါ။ နေညို ဘဏ်စာအုပ်ကို scan ဖတ်ပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။ အလှူငွေ လက်ကျန်ထဲက
အခု ကီးချိန်း အတွက်3 သိန်း ကျပ်နဲ့ ဖိုရမ် ပြင်ခ အတွက် 90000 ကျပ် ထုတ်ထားပါတယ်။
ဖိုရမ် ပြင်ခ က ဒေါ်လာ 100 ကျတဲ့ အတွက်ဒီနေ့ ပေါက်ဈေးက 885 ဖြစ်လို့ လွဲခပါ အပြီး ကိုးသောင်း ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ရေအလှူအပြီး လက်ကျန်ငွေများနဲ့ ကိုAndrewsway လှူထားတဲ့ အလှူငွေပေါင်းလိုက်ရင်
စုစုပေါင်း 691968 ကျပ် ရှိပါတယ်။ အခု ကီးချိန်းဖိုးနဲ့ ဖိုရမ် ပြင်ခ နုတ်လိုက်ရင် စုစုပေါင်း ဘဏ်စာအုပ်မှာ 301968 ကျပ် ကျန်ပါတယ်။
ကော်နက်ရှင် လုံးဝမကောင်းလို့ နောက်နေ့တင်ပေးပါ့မယ်။
ကီးချိန်း ဝယ်တာ ..က နှစ်သိန်း ခုနှစ်သောင်း နဲ့ခြောက်ထောင်ကျပါတယ်..
ပိုငွေ က နှစ်သောင်းလေးထောင်ကျန်ပါတယ်.. ကျန်တဲ့ပိုငွေကျွန်တော့်လက်ထဲမှာပါ..
မနက်ဖန် - 12 Dec 2010 (Sunday) 8:00 AM -
Dover ပိုလီကျောင်းဘက်ထွက် တဲ့ အပေါက်နားလေးမှာ ဆုံကြတာပေါ့ ... ။
နောက်ကျမယ်ဆိုပါက ... ကျနော် (98216 443)ဆီဖြစ်ဖြစ် ကိုထွန်းအောင်ကျော် (9851 7195) ဆီ ... လှမ်းအကြောင်းကြားပေးပါ ။ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ အချိန်မီလာခဲ့ပေးကြပါ။ MEF မန်ဘာတွေရဲ့ စည်းလုံးမှုကိုလဲပြသချင်လို့ပါ။
မနက်ဖန်ကျရင်တော့ MEF ကိုယ်စားပြုပြီးလုပ်ကြမယ့် လှုပ်ရှားမှုလေးမှုလေးအတွက်နဲနဲလေးထပ်ပြီး လိုအပ်တာလေးတွထပ်ပြီးအသိပေးချင်ပါတယ်။
MEF Sport Shirt ၀ယ်ထားကြသူများကတော့ အဲ့ဒါလေးဝတ်လာကြပါ။ (မယူကြရသေးသူများ KPZ ထံဆက်သွယ်ပြီး ရယူကြပါ)
တခုအသိပေးချင်တာကတော့ ... လုပ်အားပေးကြမယ့်သူများ Formal ဖြစ်မယ့် စတိုင်မျိုးလေးတွေဘဲဝတ်လာကြစေချင်ပါတယ်။ ဘောင်းဘီဆိုရင်လဲ စတိုင်ဘောင်းဘီမျိုးပေါ့ ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီမ မ၀တ်ဖို့တော့ သူတို့ကော်မတီက request လုပ်ထားပါတယ်။
၃) MEF Key Chain တွေကတော့ KPZ ယူလာပါလိမ့်မယ် ။
၄) MEF အကြောင်းလေးရေးထားတဲ့ ဝေမယ့် စာစောင်တွေလဲ Quality ကောင်းကောင်းနဲ့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီလို့သိရပါတယ်။
၅) Seminar ကော်မတီအဖွဲ့က တောင်းခံလာတဲ့အကူအညီတွေကတော့ ...
C.1) လာရောက်ကြမယ့်တက်ရောက်သူတွေကို Dover MRT ကနေ Seminar လုပ်မယ့် Hall ဆီကို လမ်းညွှန်ပေးဖို့ရယ် ..
C.2) ဆရာတွေ ဆရာမတွေကို နေရာချထားပေးဖို့ရယ် ...
C.3) ဟောပြောမယ့်အကြောင်းအရာစာရွက်စာတမ်းဝေဖို့ နဲ့ Feed back form တွေဖို့ပြန်သိမ်းယူဖို့ရယ် ...
C.4) တက်ရောက်သူများဆူညံမှုများရှိခဲ့ပါက ထိမ်းသိမ်းပေးဖို့ရယ်
C.5) နောက်ထပ် Seminar တွေထပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် စေတနာရှိသလောက်ထည့်ဝင်နိုင်တဲ့ အလှူခံမယ့်ကိစ်စ ကူညီပေးရန်
C.6) လုံခြုံရေး ကိစ်စ လိုအပ်ခဲ့ပါက ... ကူညီပေးရန်
C.7) နေ့လည်စာစားချိန်တွင် ... Hall ခန်းအတွင်းတွင်လဲ ရှားပါး Video Presentation တခုပြထားမှာဖြစ်ပြီး၊ ... Hall ခန်းအတွင်းသို့ဝင်ရောက်နိုင်သော Main Door ၂ ခု ပိတ်နေမှုမရှိစေရန် ... ကာကွယ်ပေးရန် ...
အောက်ပါအတိုင်း လူစာရင်းခွဲထားပါတယ်။ တချို့ကိစ်စတွေက တခုပြီး မှနောက်တခုလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ...
မန်ဘာတွေကို တာဝန်တခုပြီးပါကလဲ နောက်တခုမှာ ထပ်ထည့်ထားပါတယ်။ သိပ်ပြီးတော့ Heavy ကြီးမဟုတ်ပါဘူး ။ တချို့ကိစ်စတွေကို သူတို့ကော်မတီအဖွဲ့မှာလဲ လုပ်အားပေး ၃၀ ယောက်လောက်နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ကြရမှပါ။
ဥပမာ .... လမ်းညွှန်တဲ့အလုပ် (8am-10am) ပြီးသွားပါက ... Hall ခန်းအတွင်း တခြားအကူအညီတွေလုပ်ဖို့ လာရောက်ပူးပေါင်းနိုင်ကြပါတယ်။ 8am-10am လို့အကြမ်းဖျင်းပြောပေမယ့်လဲ လူမရှိတော့ပါက စောစောလာရောက်ပူးပေါင်းနိုင်ကြမှာပါ။
၆) မှတ်တမ်းတင်မယ့်ဒါရိုက်တာကိုငယ်တော့ ရိုက်ကူးရေးအတွက် အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေလောက်ပြီထင်ပါတယ် ....
CIVIL SEMINAR SINGAPORE 2010 နဲ့ MEF မန်ဘာများ ပူပေါင်းလှုပ်ရှားမှု
12 Dec 2010 (8am-530pm)
မနက် ၈ နာရီအရောက်
လာရမယ့် နေရာလေးကတော့ ...
မနက်ဖန် MEF member တွေဝတ်ဆင်သွားကြမယ့် MEF ရဲ့ ပထဦးဆုံး ၀တ်စုံလေးပါ။
ဖိုရမ်ထဲက အသက်ကြီးတဲ့ ကျနော်တို့လိုအရွယ်အတွက် နေရာမရွေးဝတ်လို့အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ... တခြား သက်တော်ကြီးမန်ဘာများရဲ့ အကြံပြုချက်အတိုင်း နောက်ကျောဘက်က MEF လိုဂိုစတတ်ကာပြားကြီးနဲ့ စာတမ်းကိုတော့ ဖြုတ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်မှာတော့Assignment တွေနဲ့ပိနေလို့ ဒီထဲကိုမရောက်ဖြစ်တာ ဒီနေ့မှဘာထူးခြားတာများရှိမလဲဆိုပြီးတော့ဝင်ကြည့်မိတာ ခုမှအဲ့seminar အကြောင်းသိလိုက်ရတယ်ဗျာ..... :(
စောစောကမသိလိုက်ရဘူးဗျာ...... အဲ့လိုမျိုးseminar တွေကိုတအားစိတ်ဝင်စားတာ
မန်းလေးမှာတုန်းကလဲ အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရင်အမြဲတတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီး တက်ဖြစ်အောင်တက်တယ်။ ရသမျှအသိပညာလေးတွေကို စုဆောင်းတယ်။
အခုတော့ တကယ့်ဆရာကြီးတွေပေးမဲ့အသိပညာတွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီဗျာ.....၀မ်းနည်းလို့မဆုံးဘူး.......:'( :'( :'(
အပေါ်က ကိုထွန်းအောင်ကျော်ပြောသွားတာလေးကိုနည်းနည်းမရှင်းလို့ မေးကြည့်ကြည့်ဦးမယ်နော်..
တနင်္ဂနွေနေ့ကဒီနေ့လေ ဒါပေမဲ့ 14.12.2010 ကတော့အဂါင်္နေ့ကျမှ
တကယ်လို့နောက်ထပ် ခုလိုပွဲတွေများရှိဦးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ကျွန်တော်လဲ MEF မန်ဘာတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်အားဖြည့်ချင်ပါတယ်ဗျာ...
ပြီးတော့ MEF ရှပ်အကျီလေးကိုလဲလိုချင်မိပါတယ်..... ဘယ်သူ့ဆီမှာဘယ်လိုပြောရမှာလဲမသိဘူးနော်??
တီရှပ်က မKPZ ကို ဆက်သွယ်ပြီးတော့ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အင်္ကျီ ၀ယ်တဲ့သူတွေကို MEF သော့ချိတ် ပရိုးမိုးရှင်းပေးပါတယ်။
အကိုပြောထားတဲ့ အစည်းအဝေးက အရင် နိုင်ဝင်ဘာလက လုပ်တဲ့အစီအစဉ်ပါ။
ဒီနေ့ပဲ Seminar မှာ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ MEF ရဲ့ အကြောင်းကိုလည်း လူတော်တော်များများက စိတ်ဝင်စားစွာမေးကြပါတယ်။ ဒီနေ့ ဖိုရမ်အနေနဲ့ ပါဝင်ဆောက်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ မင်ဘာတွေအားလုံးကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ ဒီနေရာကနေပြောပါရစေဗျာ။ အထူးသဖြင့် Civil major မဟုတ်တဲ့ ဖိုရမ်မာတွေ ပေါ့ဗျာ။ သူတို့မှာ ကိုယ့်မေဂျာ မဟုတ်တဲ့အတွက် နားထောင်လို့အဆင်မပြေကြဘူးလေ။
ကျန်တဲ့ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံတို့ ဗွီဒီယိုတို့ကိုတော့ ကိုချစ်သီး၊ ကိုငယ် နဲ့ ကိုဖြိုးတို့ကနေ တင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်က ကိုချစ်သီးပို့စ်တင်မလားလို့ စောင့်နေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ညီမ မနော ကမေးလိုက်လို့ ၀င်ဖြေရင်းနဲ့ မနေနိုင်လို့ ရေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ဖိုရမ်အနေနဲ့ ပါဝင်ဆောက်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ မင်ဘာတွေအားလုံးကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ ဒီနေရာကနေပြောပါရစေဗျာ။ အထူးသဖြင့် Civil major မဟုတ်တဲ့ ဖိုရမ်မာတွေ ပေါ့ဗျာ။ သူတို့မှာ ကိုယ့်မေဂျာ မဟုတ်တဲ့အတွက် နားထောင်လို့အဆင်မပြေကြဘူးလေ။
ညနေပိုင်းလေးမှာ နားထောင်တာတောင် ၂ ရေးလောက်ရလိုက်တယ်... ;);););)
ကိုထွန်းအောင်ကျော်က ကျွန်တော်ကို စောင်းပြောတယ်နဲ့တူတယ်... :):):)
ဘာပဲပြောပြော ညီအစ်ကိုလို မောင်နှမလို ခင်မင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရလိုက်တာက
ဘယ်လိုမ တန်းဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဆုတခုလိုပါပဲ.... နောင်တခွင့်သင့်ရင်လဲ အဲလိုပွဲမျိုးလေးတွေမှာ ပါဝင်ချင်ပါသေးတယ်....
မနေ့ညက ရေးမလို့ပါဘဲ ko tunaungkyaw ရေ ....
ဒါပေမယ့် ဖခင် ကြီးနေလို့သိပ်မကောင်းဖြစ်နေလို့ (အသက်က ၈၁ ကျော်ပြီလေ) နဲနဲအလုပ်ရှုပ်သွားပြီး ၊ ပြန်လာတော့လဲ ပင်ပန်းနေလို့ ပို့စ်မတင်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး ။ အဲ့ဒါကြောင့်အခုမှဘဲ တင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံလေးတွေကတော့ ကျနော် အများကြီးမရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး ။ ကို phyo & konge တို့ကတော့ ပိုရိုက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
မနေ့က 12 Dec 2010 (8am - 6pm) .....
Civil Engineering Seminar Singapore 2010 ပွဲလေးနဲ့အတူ MEF မန်ဘာတွေကို အကူအညီတောင်းလို့ .....
MEF က မေဂျာစုံ မန်ဘာတွေစုစုပေါင်းပြီး သွားရောက် အကူအညီပေးခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီပွဲလေးကိုဦးစီးကျင်းပခဲ့တဲ့ကော်မတီရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ အဲ့ဒီပွဲလေးမှာ ကျနော်တို့ MEF forum ကို ကြော်ငြာတဲ့အနေနဲ့ တက်ရောက်လာကြသူအားလုံး ၅၀၀ ကျော်လောက်အနက် MEF booklets (စလုံးမန်ဘာတွေဆီက ကောက်ခံရရှိသလောက်အလှူငွေလေးနဲ့နိုင်သလောက်) အုပ် ၃၀၀ လောက်ဝေငှခဲ့ပါတယ်။ MEF key chain လေးကိုပါတွဲပြီး ဝေပေးခဲ့ပါတယ်။
ဆရာကြီး Prof. Nyi Hla Nge နဲ့ Dr. Htin Aung နဲ့ တခြားဆရာ ၊ ဆရာမတချို့ကိုလဲ MEF ဖိုရမ်လေးရဲ့ ဦးတည်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ Sharing အပိုင်းတွေကို ရသမျှအချိန်လေးအတွင်းမှာ အကျဉ်းချုပ်တင်ပြလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးညီလှငယ်ကလဲ ကောင်းချီးပေးခဲ့ပါတယ်။
တက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေများထဲကလဲ MEF အကြောင်းစိတ်စားတစားနဲ့ မေးမြန်းလေ့လာခဲ့ကြသူများလဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
MEF ၀တ်စုံလေးနဲ့ လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အတွက် လူအများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှု အကဲခပ်ကြမှုကိုလဲ ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
Seminar ပွဲကြီး ချောချောမောမော အောင်မြင်စွာပြီးသွားမှုနဲ့အတူ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ရဲ့ နိဂုံးချုပ်စကားပြောကြားရာမှာ MEF ဖိုရမ်မန်ဘာများရဲ့ပါဝင်ကူညီခဲ့မှုတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အားလုံးခြုံပြီးပြောပြရင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
မေဂျာမတူကြပေမယ့် MEF ဖိုရမ်အတွက် စည်းလုံးစွာပူးပေါင်းကူညီလှုပ်ရှားပေးခဲ့ကြသူအားလုံးကို ဖိုရမ်ကိုယ်စား လေးစားစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
အောက်မှာ ကော်မတီကနေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြန်ပို့လာတဲ့ အီးမေးလေးကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Appreciation of your attendance/support for Civil engineering Seminar 2010 (Singapore)
Dear All Civil Engineers (Saya/Sayamas/ Brothers & Sisters),
Our Civil Engineering Seminar has been held successfully in Singapore today, 12 December 2010.
We would like to share the the pleasure that we have satisfactorily held sucharemarkable seminar in Singapore.
All of you have given your valuable time, efforts and some of your own contribution to have suchagreat and pleasant Seminar.
Here we would like to appreciate your attendance,help, support and effort for this event from Pre-Seminar to Post-Seminar.
1) Saya Gyi U Nyi Hla Nge for all his initiatives, efforts and advices from day 1 to to date to haveagreat & knowledgeable Seminar in S'pore. And all Saya's encouragement & understanding to all.
2) All Speakers who were sacrificed all their family /personal time and put efforts so much in preparing presentation/slides to fit into shorter time (30 mins).
3) Saya U Aung & Saya Dr Soe Thein for attending and gave us the good speech, awarding appreciation trophy to all speakers & Saya U Nyi Hla Nge.
4) Ko Kyaw Ye Oo and his members; for all transportation in carrying book/ printed copies and helping to buy required items for whole day.
5) Ko Thura Naing & MEF Engineering Forum group ; Preparing of design/logo for badges & trophy. And distribution of all abstracts/feed back forms and collection back. And arrangement for hosting Sayas and in/out hall arrangement for whole day.
6) Ko Nay Win Tun & groups; all their arrangement for buffet catering services and all requirements for refreshment. And preparing for our Saya lunch & refreshement.
7) Ma Hla Hla Shein & group : Preparation of envelopes for donation. And requesting from Audience and hand over perfectly the contributed/donated money. Distribution for all registration forms. Their support at Q & A section.
8) Ma Aye Myat Phyu, Ma Thin Thin Ngwe & Ma Moe Moe Moe Swe & their group members :Much giving attention in selling s books and other necessary arrangements. Here thanks to Sayama Daw Cho Cho Win to promote in selling book. Ma Thin Thin Ngwe for distribution of presenter, Ko Ne Min Hein's slide in CD.
9) Ma Thin Thin Nwe & Ma Moe Moe Swe; for spending their own time to call (or sms) for making confirmation to get almost exact amount of attendance.
10) Ma May Mee Aung : MC for whole day event with her sweet voice.
11) Ko Win Maung & friends to haveagood Videos recoding. And transportation for our Sayas.
12) Ko Khin Mauhng Gyi for taking photos asaprofessional photographer.
At last, not least very special thanks to all Myanmar Engineer (Bro & Sis) from other countries/ Singapore for their attending/participating and donation money to held remarkable Seminar in S'pore. And All their return feedbacks with advice and comments.
Hope to haveagreat Seminar at next year and all of you to be involved actively again as today event.
Ma Aye Mar Mar
On Behlaf of Organizing Committee
Note: Pls help me to forward to your members with thanks.
ကျနော့်ကင်မရာထဲရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို အရင်တင်လိုက်ပါမယ်။
ခန်းမအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်သောအ၀င် ၂ ပေါက်တွင် MEF စာစောင် ၊ MEF သော့ချိတ် နဲ့ Seminar အနှစ်ချုပ်၊ feedback forum ဝေငှနေမှု လှုပ်ရှားနေမှုများ
ဆရာကြီးဦးညီလှငယ် ၊ ဒေါက်တာထင်အောင် စသည် ....
တပျော်တပါး နေ့လည်စာ စားနေကြသူ MEF မန်ဘာများ
ညနေပိုင်း Tea Time အတွက် ပြင်နေပေးနေကြသူ MEF မန်ဘာများ
Seminar အပြီး ဆရာကြီးဦးညီလှငယ် နှင့် လှုပ်ရှားခဲ့ကြသော MEF မန်ဘာများ (တချို့) အမှတ်တရ
ကျွန်တော် ရိုက်ဖြစ်တာလေးတွေလဲ ဆက်တင်ပါရစေ.. ဒီနေ့တော့ အစပျိုးလေးပေါ့နော်.. ဗီဒီယိုလည်း သတင်းဇတ်လမ်း ပုံစံမျိုးလေး Cut လုပ်ပြီးအားလုံးကြည့်ရအောင် တင်ပါ့မယ်။
ဟောပြောကြသူ ဆရာကြီးများနှင့် စီနီယာအင်ဂျင်နီယာများ...
model boy ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပုံတွေကြည့်ရတာ အရမ်းကြည်နူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။
အခုလို အသိအမှတ်ပြု စီမီနာတစ်ခုမှာ ကိုယ့်ဖိုရမ်လိုဂိုနောက်ခံထားပြီး ရှင်းလင်းနေတာ အထူးဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်အနေနဲ့ ထိရောက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပါ။
၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးကြတဲ့ အသင်းဝင်အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ကိုငယ် .. အကိုရေ .. ဗီဒီယိုဖိုင်ပါရှိရင် တင်ပေးပါဦးနော်အကို ။ သိမ်းထားချင်လို့ပါ။
ကျနော်လည်း အဲလို seminar ပုံစံလေးလုပ်ချင်ခဲ့တာဗျ။ ကျနော်မလုပ်နိုင်ပေမယ့် အခုလို ပွဲဖြစ်မြောက်သွားတာ အင်မတန် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ကြသော
MEF အဖွဲ့သားများအာားလုံးနှင့် ပွဲဖြစ်မြောက်အောင် ကူညီပေးကြသူများနှင့်တကွ တက်ရောက်ကြသူများအာားလုံးကို အလွန်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်း ဖြစ်မိပါတယ်။
I am so happy to see seminar photo.
If I got changes , Try to attend /participate in future.
မကေပီဇက်ကို စာတိုရေးပြီး အကိုလိပ်စာပေးပြီး ပိုက်ပိုက်လွဲပေးလိုက်ပါ သူပို့ပေးပါလိမ့်မယ် :plane:
mail cannot be sent , full of space . Pls provide other ways.
Hi Ko linn
U can sent email to khinephyuzaw@gmail.com
ဦးဇော် ရဲ့ အမှတ်တယတွေ ကြည့်လို့မရပါ :help:
အကိုကိုငယ်တင်တဲ့ ပုံတွေပဲကြည့်လို့ရပါတယ် :)
ကိုဇော်က tinypic.com ကနေ တင်ပေးထားတာပါ။
အခုတော့ တစ်ခြား image site တစ်ခုကနေ လင့်ပြန်ပြင်ပေးထားပါပြီး။
လာချင်လိုက်တာ မုန့်စားချင်လို့ပါ ဟိဟိ။ ပျော်စရာကောင်းမှာပဲနော်။ အမြဲဆုံတွေ့ကြရင် ပိုပျော်စရာကောင်းမယ်နော်
နောက်ကျသွားတယ်နော် ..ဖိုရမ်ကို အခုမှ ရောက်ဖြစ်လို့ပါ ... အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားတဲ့ အတွက် Congratultion ပါ ခင်ဗျာ ..
ပြီးသွားမှ ပြောတယ်လို့မထင်စေချင်ပါဘူး..။ အဲဒီပွဲမှာ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးချင်တာ အရမ်းပါပဲ..။ ကိုယ့်မေဂျာမဟုတ်ပေမယ့် စက်မှူကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆို
လေးစားပြီးသား စိတ်အခံနဲ့မို့ပါ..။ ဆရာကြီးတွေကိုလည်း အရမ်းလေးစားပါတယ်..။ MEF ကိုကိုယ်စားပြုလုပ်ကိုင်ပေးရမှာမို့လည်း အရမ်းစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်..။
ဒါပေမယ့်စာကြောက်တတ်တဲ့သူမို့ စာမေးပွဲနီးတာနဲ့ဘာကိုမှစိတ်မ၀င်စားနိုင်ဘဲ အားလုံးပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်..။ အွန်လိုင်းမှာရှိပေမယ့်စာလုပ်တုံးလေးပဲရှိဖြစ်တာ
များခဲ့တာမို့ပါ..။ အားလပ်ချိန်ရလို့(ခိုး)၀င်မယ်ဆိုတော့လည်း အကောင့်က မြန်မာလိုဖြစ်နေ..၊ ကျောင်းက Lab ခန်းကနေ မြန်မာလိုဝင်မရနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားဝင်ပေမယ့်
မရခဲ့လို့ ပြဿနာတစ်ခုတောင် အသစ်တွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်..။ (ကိုယ့်စက်နဲ့ပဲသုံးနေကြကနေ မြန်မာစာရိုက်လို့မရ ဒေါင်းခွင့်မရတဲ့ စက်တွေနဲ့ဆို မြန်မာလိုအကောင့်လုပ်ထားတာ
တီရှပ်ကလည်း ပိုက်ဆံပြတ်သွားလို့မ၀ယ်နိုင်သေးလို့ပါ..။ (အိမ်က ၅ လစာပေးလိုက်တာ ၃ လနဲ့ ကုန်သွားလို့ပါ..။;)) ပိုက်ဆံရှိတာနဲ့ ယူပါမယ်..။ နောက်တစ်ခါကြုံရင်တော့
ပါနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်..။ စာမေးပွဲနဲ့ဝေးပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးပါ..။:yo:
အဲဒီနေ့က နွေဦးက မက်ဆေ့ပို့ပါတယ်..။ သတိလည်းရပါတယ်..။ စာမေးပွဲအလယ် တည့်တည့်နေ့ကြီးမို့ ဘယ်လိုမှ မလှူပ်သာပါ..။ တီရှပ်ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားပါသည်..။
ပိုက်ဆံရှိလာတာနဲ့ ယူပါမည်..။ (ခုတော့ ကြွေးတင်နေပါသည်။ ရှင်ဘုရင် ဆပ်ပါလိမ့်မည်။..:lalala:)
မေဂျာခွဲခြားချင်စိတ်မရှိပါ..။ စက်မှူကျောင်းသားစစ်စစ်ကြီးများကို လေးစားပါသည်..။:yo:
မေဂျာခွဲခြားချင်စိတ်မရှိပါ..။ စက်မှူကျောင်းသားစစ်စစ်ကြီးများကို လေးစားပါသည်..။
စက်မှူကျောင်းသားစစ်စစ်များကိုလေးစားသော်ကြောင့်စက်မှူကျောင်းသားများလုပ်သောပွဲတွင်သာလာမည်လို့ ပြောတာလား;)။( ဒီပွဲကမြို့ ပြအင်ယာများလုပ်တဲ့ ပွဲလေ။)
မြန်မာဖေါင့်သွင်းမထားတဲ့စက်တွေမှာ ဖေါင့်သွင်းစရာမလိုဘဲ ဖတ်လို့ ရတဲ့နည်း စေတန် ရဲ့ ဆိုက် (http://dl.dropbox.com/u/283860/host/bookmarklet/index.html)မှာတင်ထားတယ်။
ကိုချစ်သီးလည်း ဒီနေရာမှာ (http://myanmarengineer.org/forums/showthread.php?5576-%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%92%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%81%E1%80%AF%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%9D%E1%80%84%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%AC-%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%96%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94&p=70310&viewfull=1#post70310) ရှင်းပြထားတယ်။
ဒီပွဲကမြို့ ပြအင်ယာများလုပ်တဲ့ ပွဲလေ။
ဟုတ်ပါတယ် အကိုရေ .... Seminar ပွဲကတော့ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာတွေလုပ်တဲ့ပွဲပါ ။
အကူအညီတောင်းလို့ ကျနော်တို့ သွားရောက်ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးတာနဲ့ ... MEF ကိုကြော်ငြာတဲ့အနေနဲ့ ... MEF သော့ချိတ်နဲ့ MEF စာစောင်ဝေခဲ့တာကတော့ ....
MEF ကိုကိုယ်စားပြုပြီး ... အချိန်ပေးဖို့အဆင်ပြေသွားကြတဲ့ မေဂျာစုံ MEF မန်ဘာတွေ အားလုံးပါ။
(MEF က Civil Engg မန်ဘာတွေချည်းသွားရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတယ် ထင်မှာစိုးလို့ပါ)
Civil Engineering Seminar, Singapore (2010) မှာ၊ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ကို ကိုယ်စားပြု စက်ာပူမှ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မာများ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးရင်း မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်အကြောင်းကို အသိပေးကြော်ငြာနိုင်ခဲ့တာမို့၊ ကြည်နူး ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မူလက ပါဝင်ဆင်နွဲဖို့ မူလက ရည်ရွယ် မျှော်လင့်ပေမယ့်လည်း၊ အရေးတကြီးဆောင်ရွက်ရမယ့် အကြောင်းကိစ္စတခု ပေါါပေါက်လာတာမို့၊ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ရောက်ရှိနေတဲ့ နေရာကလည်း၊ ရေတပ်စခန်းတခုမှာမို့ သွားရေးလာရေးကအစ ခက်ခဲလှပါတယ်။ ဒီ့အတွက်လည်း မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် မှ စီစဉ်သူများကို တောင်းပန်ပါတယ်။
ကိုထွန်း နှင့် ဒူဒူကြီးရေ
USS George Washington War Ship အကြောင်းစိတ်ဝင်စားလို့သိသလောက်ဗဟုသုတ အနေနဲ့မျှဝေပေးပါလားလို့တောင်းဆိုပါရစေ။
ဥပမာ-ရေဒါ control၊ nuclear power သုံးစွဲမှု၊ GPS system တို့စသဖြင့်ပေါ့ဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲဆိုတာရယ်၊ ထူးခြားမှုတွေရယ်ပြောပြပေးပါလား။ တောင်မြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်က yellow sea ကနေပစ်ရင် သူ့၏ missile rocket က အချင်း diameter 1000km လောက်ထိရောက်တယ်ဆိုတော့ တရုတ်ပြည်မကြီးထဲထိရောက်နိုင်တယ်လို့ ပြောလို့အဲဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားသွားတာပါ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
မနီနီမာ နမိတ်ဖတ်လိုက်လို့လားမသိဘူး။ Yellow Sea မှာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေတဲ့ သဘေ်ာတွေအတွက်၊ Back Up Fleet ကို ချန်ဂီရေတပ်စခန်း Changi Naval Base မှာကပ်ထားတဲ့အချိန်၊ အဲဒီ Fleet အတွက် ကျွန်တော်တို့ဆီကနေ Marine Gas Oil တန်ချိန် ၂၅၀၀၀ ဝယ်တာမို့၊ ကျွန်တော်လည်း ကန့်လန့် ကန့်လန့်နဲ့ ပါသွားခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီကျမှ စစ်သဘေ်ာအကြီးစားကြီးတွေကို မြင်ဖူးရပါတော့တယ်။
နောင်ကိုလည်း မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ နဲ့ နည်းပညာနယ်ပယ် အသိုင်းအဝိုင်း များရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ တွေ့ဆုံပွဲတွေနဲ့ စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေမှာ အခုလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မာများ စည်းစည်းလုံးလုံး၊ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ပါဝင်ဆင်နွဲနိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျား။
တလက်စတည်းမှာ ဦးရီးတယောက်ပျောက်နေသမို့ နိုင်ငံရပ်ခြားကနေ တကူးတက ဖုန်းနဲ့တမျိုး၊ စာနဲ့ တသွယ် သတင်းမေးကြတဲ့ အုပ်ချုပ်သူများအပါအဝင် ဖိုရမ်မှ ချစ်ခင်လေးစားရသူများကိုလည်း၊ ကျေးဇူးအထူးတင်မိပါတယ်။
အခုတလောမှာ အလုပ်က အတော့်ကိုရှုပ်နေခဲ့တာပါ။ နှစ်ကုန်မို့ တရုံးလုံးနီးပါး ခွင့်လက်ကျန်တွေရှင်းကြချိန်၊ မှာ အလုပ်တွေရှုပ်ပြီး၊ ခွင့်လေးတောင် မယူနိုင်တဲ့ ဘဝ ဖြစ်နေတာပါ။ အမေကတော့ အသက် ၄၀ ပြည့်သွားပြီး ၄၁ နှစ် ထဲဝင်တော့ မှာမို့ ဗေဒင်သဘောအရ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဖေ ကတော့ အလုပ် အရမ်းများရင် ခဏလောက် အလုပ်ထွက်ပြီးနားနား နေနေ နေဖို့ ပြောပါတယ်။ ဇနီးသည်ကတော့ Bonus တွေဘာတွေရပြီးရင် အလုပ်ပြောင်းဖို့ အကြံပေးပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ မနေ့က အလုပ်ထွက်စာတင်တဲ့အခါ၊ ဆရာသမားက နှစ်ကုန်ပြီးမှ ညှိကြတာပေါ့ကွာဆိုပြီး၊ ဖျောင်းဖျကာ ဝိုင် အဝတိုက်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ လည်း အလုပ်တွေရှုပ်ကာ အခုလိုပဲနေရဦးမယ်ထင်မိပါတော့တယ်။
ကျနော်က ကိုထွန်းနံမည် ကိုလုပ်အားပေး စာရင်းထဲမှာတွေမိပေမဲ့Group photo မှာ ကိုထွန်းကိုမတွေ့ တော့မမူကိုမမေးဘဲ စာရင်းပေးလိုက်မိလို့ပွဲ နေ့ ကျမှ ပါမစ်မရတာကြောင့် မလာနိုင်ဘူးထင်နေတာ;)။
ရပါတယ် Ko Tun ရေ ....
မလာဖြစ်ကြသူတွေအတွက် ... အားလုံးကလဲ နားလည်ကြပါတယ်ဗျာ ...
Ko Tun တယောက်မပါတော့ နဲနဲတော့အားလျော့သွားရတာပေါ့ ....
pargyi တယောက်လဲ အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ မလာနိုင်ခဲ့ဘူးလေ ....
KPZ ဆိုရင်လဲ သင်တန်းသင်စရာရှိလို့ မအားတဲ့ကြားက မရမက နေ့တ၀က်လာအားပေးသွားသေးတယ် ...
konge ဆိုရင်လဲ သူငယ်ချင်းတယောက်မင်္ဂလာဆောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးစရာရှိတာတောင် ... MEF မှတ်တမ်းတင်ပုံကောင်းလေးတွေဖန်တီးပေးဖို့အတွက် မနက်တခေါက် ညနေတခေါက် ရအောင်လာပြီးမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးသွားတယ် ...
(konge ရေ .... ဖန်တီးထားတာလေးတွေကို ကြည့်ချင်လှပြီ ၊ တင်ပေးပါအုံး)
အချိန်ပေးဖို့အဆင်ပြေကြလို့ လာရောက်လှုပ်ရှားကြသူတွေလဲ ထိုင်ရတယ်ကိုမရှိဘူး ၊ နောက်ပြီးတချို့ MEF မန်ဘာမဟုတ်သူတွေလဲ MEF အတွက်အကူအညီပေးသွားကြသူတွေရှိသေးတယ်။
MEF ရဲ့ မန်ဘာတွေစည်းလုံးမှုကတော့ တကယ့်ကို စံတင်လောက်ပါတယ်ဗျာ ....
နောက်နှစ်တွေလဲ နှစ်တိုင်းဆက်လုပ်နိုင်ကြဖို့တော့ ဆရာကြီးဦးညီလှငယ်ကတော့ တွန်းအားပေးရင်း နိဂုံးချုပ်စကားပြောကြားသွားပါတယ်။
နောက်နှစ်တွေ အခွင့်အခါသင့်ရင် ထပ်လှုပ်ရှားကြသေးတာပေါ့ ။
တခြားမေဂျာတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလို အခွင့်အရေးရမယ့် ၊ MEF ကိုယ်စားပြုပြီးလှုပ်ရှားလို့ရမယ့် ... ပွဲလေးတွေရှိရင်လဲ အသိပေး ပြောကြပါအုံး ....
Phyo ဆီက ပုံလေးတွေထပ်ရလာလို့ တင်လိုက်ပါတယ်။
(အဲ့ဒီနေ့က ကျနော့်ကင်မရာ နဲ့သိပ်မရိုက်ဖြစ်လိုက်လို့ ... )
ကျင်းပရာခန်းမဆီသို့ သွားရမည့် Dover MRT Station မှထွက်ထွက်ချင်းနေရာတွင် စောင့်ကြိုလမ်းညွှန်နေကြသည့် MEF အဖွဲ့ဝင်များ ...
(၀ဲမှယာ) pigkalay ၊ phyomaungmaung ၊ ကိုဖိုးတာ
နာရီဝက်လောက် ကြိုတင်ရောက်နှင့်နေကြပြီး ... ခန်းမအတွင်းအ၀င်ဝတွင် ....
MEF စာစောင် နှင့် MEF သော့ချိတ် များဝေတော့မည် တကဲကဲ ... ဖြစ်နေကြသူများ ....
လာရောက်ကြမည့်သူများအတွက် နေ့လည်စာ ဘူဖေး အပြင်အဆင် ...
ဆရာကြီးဦးညီလှငယ် ကြီးမှူးပေးနေသည့် အမေးအဖြေ Section
တခြား Engineering နယ်ပယ်ကဖြစ်ပေမယ့် .... Civil မဟုတ်သော်ငြားလဲ Civil Engineering Seminar မှာ
MEF ဖိုရမ်ကိုယ်စားပြုအဖြစ် စည်းစည်းလုံးလုံးလာရောက်လှုပ်ရှားပေးခဲ့ကြသူ မန်ဘာများထဲမှတချို့
ကူညီလှုပ်ရှား လုပ်အားပေးခဲ့ကြသူ MEF မန်ဘာများ နေ့လည်စာ ဘူဖေးစားသုံးကြပုံများ ..
အပြင်မှာ သိပ်မတွေ့ဖြစ်ကြတဲ့ ဖိုရမ်မာတွေ ... ကူလဲကူညီရင်း စကားတွေလဲပြောရင်း
(၀ဲမှယာ) နွေဦး ၊ JME ၊ phyomaungmaung ၊ chit tee ၊ tunaungkyaw ၊ လိပ်ကြီး ၊ chan ၊ sithuaung ၊ phyo
ဆရာကြီးဦးညီလှငယ် ၊ Dr ထင်အောင် .. စတဲ့ဆရာကြီးများနေ့လည်စာသုံးဆောင်အပြီးတွင် ... အချိန်လုလို့
MEF ဖိုရမ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ၊ နည်းပညာ နယ်ပယ်စုံ 24h အွန်လိုင်း sharing လုပ်နေမှုအကြောင်း တင်ပြပြီး
သြ၀ါဒ ခံယူနေကြသူ MEF မန်ဘာများ ........
ညနေပိုင်း .. Tea Break အတွက် ၀ိုင်းဝန်းပြင်ဆင်ပေးနေကြစဉ် ...
မြည်းကြည့်ပေးမယ်နော် (အဆိပ်ရှိမရှိ) :D
လိပ်ကြီး ၊ tunaungkyaw
ဆရာကြီးများ လဲ Tea Time
စိတ်ဝင်တစား နားထောင်နေကြသူများ ...
(မနက်ပိုင်းနှင့် နေ့လည်ပိုင်းတွင် ထိုင်စရာမလွတ်လောက်အောင် လူပြည့်ခဲ့သောလဲ ... ညနေပိုင်း Tea Time ပြီးချိန်လောက်တွင် အလျှိုအလျှိုပျောက်ကုန်ကြသည်)
သူတို့က ပုံတင်လေ.. အနော်က လာချင်လေ..။ မပါလိုက်ရတာဝမ်းနည်းလို့မဆုံးဘူး..။ မီး စာကိုသူများနားလည်အောင်မရေးတတ်တာကို
ဗွေမယူကြပါနဲ့နော်..။ ဘယ်မှာဘာပဲလုပ်လုပ် MEF ကလုပ်တာဆို ပါချင်တယ်..။ ရှင်းရှင်းပဲ..။ ဟဲ ဟဲ..။
တတ်နိုင်တာဝင်လုပ်မယ်..။ မလုပ်ပေးရရင် သူများလုပ်တာလေး ညှော်ခံပြီးကြည့်မယ်..။ ဒါပဲ..။
ဗီဒီယိုလေးကိုလဲအားပေးကြပါဦးခင်ဗျား..။ ဒါကတော့ ပထမပိုင်းအနေနဲ့ ဟောပြောပွဲမစခင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ပါ့မယ်။
ဆရာကြီးဦးညီလှငယ် Seminar မစခင်ရောက်ရှိလာစဉ် ...
ဆရာကြီးများလဲ စိတ်ဝင်တစား .........
Seminar ကျင်းပခဲ့ရာ Dover Polytechnic - Auditorium
မနက်ပိုင်း Seminar စတင်စဉ် ...
ဆရာကြီးများ နဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ မျှဝေ ဟောပြောပေးခဲ့ကြသူ စီနီယာနောင်တော်ကြီးများ .... အမှတ်တရ
ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ ရှယ်ပဲဗျို့ ..
သိမ်းထားချင်သူများ၊ ဘန်းကျော်သားများအတွက်ပါ ဒေါင်းလုပ်လင့်လေး ထပ်ဖြည့်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။
အခုဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ တော်တော်လေး ဂွတ်တယ်ဗျို့။
အပိုင်း ၂ ကို စောင့်မျှော်နေပါတယ် ကိုငယ်ရေ ..
ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်မှပဲ ဘယ်လောက်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတာ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်တော့တယ်။
ကူညီပေးကြတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမအားလုံးကို ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကို AndrewSway ရေ ....
ကိုထွန်းက တကယ်လှုပ်ရှားတဲ့နေ့မှာ မလာနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်အစည်းအဝေး ၂ ကြိမ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ ဖြစ်အောင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့စဉ်တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေ အခုမှ သတိရလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
(၀ဲမှယာ) Chan ၊ Phyomgmg ၊ ကိုငယ့်မဟေသီ ၊ ကိုငယ် ၊ လိပ်ကြီး
(၀ဲမှယာ) tunaugnkyaw ၊ ချင်းတွင်းသား ၊ Phyo ၊ KPZ ၊ Joinmoeeain ၊ နွေဦး
(၀ဲမှယာ) KPZ ၊ JME ၊ နွေဦး ၊ စု ၊ pigkalay
(၀ဲမှယာ) ကိုဖိုးတာ ၊ ကိုထွန်း ၊ chan
အခုလို ပုံတွေ tag လုပ်ပြီးတင်ပေးတာကျေးဇူးပါ။ ကိုငယ်လည်း အရင် MEF တွေ့ ဆုံပွဲကပုံနဲ့ယှဉ်ကြည့် ရင်နဲ့နဲ့ ပိုပြည့် လာတယ်ထင်ပါတယ်။ ပြန်စဉ်းစားမိတော့ အခုပုံတွေကိုစောစောသာတင်မိရင်လူသစ်တွေအနေအတွက် ကို ငယ်နဲ့Mr.Zaw မှားစရာအကြောင်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ :loco:
ဗီဒီယိုအရည်အသွေးရော အက်ဒစ်တင်းရော အမိုက်စားပဲဗျာ။ I do appreciate your efforts. :thumb:
p.s - Gentleman (တကယ်တော့ ကလေးဆိုးကြီး) တစ်ယောက်ကို အနီးကပ်ရိုက်ပြတဲ့ အချိန်မှာတော့ ပြုံးမိပါသေးတယ်။